Waa maxay sababta aan Guursaday White Girl a — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Mar kasta oo aan boostada sawirada qoyskeyga on warbaahinta bulshada, jawaabaha had iyo jeer waa mid xiiso leh. The ugu caansan waa, "Wiilkaagu waa si qurxoon!"Ama" Maxaa qoyska u qurux badan!"Laakiin mid ka mid ah jawaabaha kale ee caadiga ah waa, "Ma naagtaada cad?"Dadka mararka qaarkood aad i weydiiso at shows. Jawaabtu waa haa. Xaaskeyga waa isku dhafka ah ee Hungarian, Talyaani, iyo Polish-oo ay dadka intooda badan oo kaliya ka dhigan tahay haa, iyada oo cad. Tani waa ku tacaluqda in qaar ka mid ah, laakiin naxdin leh ama xataa niyad jab dadka kale. Uma maleynayo qof waa in la yaabay ama niyad by guurka interracial, laakiin weli waxaan doonayay in ay ka hadlaan sababta aan guursaday baxsan aan "tartanka.
Go'aanka ah in ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan guursado qof uusan ahayn mid adag ii. Weligay fadhiistay oo ku qoray baxay a faa'iidada iyo khasaaraha liiska. In kastoo, haddii aan ku sameeyey, xaqiiqda ah in xaaskeyga ayaa Weligay ma arkin dhacdo ah "Martin" noqon lahaa ee category con ah. Laakiin daacad ah, Anigu ma aan rafaad farabadan dul ama taladooda ku saabsan in ay ahayd OK. Waxaan ahaa qanacsanahay in ay naagtuna waxay ahayd mid aan wax guursan, inkastoo iyadu ma ahaa madow.
Qaar ka mid ah marna ka fiirsan doono inuu u guursanayeen oo qof kale oo aan ahaa qowmiyadda la mid ah sida iyaga, sidaa darteed ha i aad sababta aan u sameeyey sheeg.
Si aad u noqoto qof daacad ah, Waxaan mar walba la filayaa in ay guursadaan dumar ah oo madow. Waxaan helay dumarka oo dhan asal u qurux badan, laakiin gabdhaha madow ahaayeen my "doorashada." Laakiin markii aan on my campus college gaaray 2006, Waxaan ahaa ma raadinaya naag at dhan. kaliya waxaan doonayay in ay koraan in aan iimaanka iyo aad u hesho waxbarasho wanaagsan. album My hore uun ka soo baxay, badan sidaa darteed waa inaan wax kale in ay diiradda saaraan. Laakiin sida aan la kulmay dad dugsiga, taageero arday la odhan jiray Jessica runtii qabteen aan fiiro iyo aan saaxiibbo bay noqdeen.
Waxaan ku orday ee wareegyada isku mid ah iyo waxaan ku dhamaaday ku biiro kaniisad la mid ah, sidaa darteed waxaan arkay kasta oo kale oo badan oo. Oo waxaan helay in ay iyada la ogaado, ayaa in ka badan waxaan ahaa barbaro iyada u. runtii Waxay Ciise jeclaa oo ay lahayd oo diyaar childlike this inuu sameeyo wax kasta oo uu ka codsaday. Her naxariistaan ​​dadka saboolka baahan ii loolan waxayna lahayd qalbi kuwa is-hoosaysiiya in jawaabay hadalka. In ka badan sanadkii hore, Waxaan daawaday iyada allabari saacadood xad-dhaaf ah iyada oo waqtiga u adeegaya at our kaniisadda. On top of dhan ah in, Waan jeclaaday iyada ku wareegsan. Our wada hadal, haddii dhab ah ama doqon, had iyo jeer biyaa fudayd. Sidaas danbeyn Waxaan bilaabay inaan ka codsan, "Waxaan guursadaan habboon tahay gabdhaan?"
Jessica ma u eg waxaan filayaa aniga iyo xaaskeyga mustaqbalka si ay u eegaan, laakiin si daacad ah oo aan ma macno ah ii. Ha heli qaldan igu, Waxaan u maleeyay in iyadu waxay lahayd suurad ka markii ugu horeysay waxaan iyada kulmay. Oo marna waa lay soo horjeeda u guursanayeen oo gabar caddaan. Waxaan kaliya ma qabaa Waxaan jeclaan lahaa. Laakiin sidii aan ku koray aan iimaanka iyo qalbigayga bedelay, aan la door bilaabay beddelo aad. My doorashada ugu weyn waxay ahayd in naagtaydii ahaato cibaado leh, iyo Jessica ahaa. Sidaas daraaddeed waxaan iyada wifed.
Marna daqiiqad sameeyey waxaana dareemayaa sida inaan ahaa degitaanka. Waxa uu dareensan yahay sida gelida inay iska eafiya iskana qof dumar ah oo cibaado leh oo keliya, sababtoo ah iyada qowmiyadda. Marnaba ma aanan dooneynin in ay qiimeeyaan aan doorbidida Waayo, naag ka badan waxa aan loo baahan yahay in naag.
Ma jiraan wax ay daruuri ka qaldan isagoo door bidayso, laakiin waxaan u leeyihiin in ay iyaga gacanta furan leh. Waan ogahay dadka qaar iska eafiya iskana xaaska kara cibaado leh sababtoo ah ma ku haboon qaar ka mid ah doorashada random. Qaar ka mid ah noo door bidaan runtii aan muhim aheyn in badan. Qaar ka mid ah noo kala doorashada laga yaabaa xitaa noqon nacas ah, sidaas darteed waxaan u leeyihiin in ay soo gudbiyaan oo dhan oo iyaga ka mid Kitaabka.
Marka adiga iyo xaaskaaga waa dhexe ee colaadda, midab maqaarka ma ahan. Nooca Body iyo xaaladda bulshada u muuqdaan kuwo aan qiimo lahayn. Waxaad doonaysaa in iyaga u noqon kuwa cibaadada iyo camalka qabow. Oo xaaskayga iyo waxaan bilaabayaa inaan kor u ilmahaagu hore, Waxaan ma noqon karaan kuwo ka badan oo ku mahadisaan iyada. Waxay hooyadeed la yaab leh oo saamayn cibaado leh oo ku saabsan wiilkayga-toona kaas oo ay leeyihiin wax ay sameeyaan iyada soo jeeda qowmiyadaha. Waa OK in xaaska in ay doonayaan in wax, laakiin waxaan u leeyihiin in ay soo gudbiyaan hawadooda noo waxa Ilaah doonayo inoo in xaaska. Waa maxay waxaan rabay oo loo baahan yahay ugu ahaa lamaane cibaado leh, iyo in ay dhab ahaan waxa Ilaah wuxuu iyaga siiyey.
Wax wanaagsan baad tidhi Trip. Ninkeyga waa White oo aniguna waxaan ahay Black oo si joogto ah aan ku weydiiyey waxa ay iga dhigtay doorato qof ka baxsan tartankayga. Waxaan mar walba dhahaan in Ilaah ka dhigay doorashada, aniga iyo isagu wuxuu sameeyey sida shaqo la yaab leh, yaa ka khayr badan ee aan abid samayn kari lahaa on aniga ii gaar ah. Ilaah waa u roon! Ka dhig samaynayaan wixii aad samayn! 116! Ciise horraysay ilaa nahay dhulka hoostiisa!
Ericka • November 17, 2013 at 8:59 waxaan ahay • Reply
Thanks for Trip daacadnimo ah Lee. anigu waxaan oggolahay. Waxaad heli kartaa doorashada, laakiin aad leedahay si aad u gacanta furan leh, maxaa yeelay, sida isagoo Masiixi ah aad uga go'an tahay marka hore waa in Masiix iyo saygaaga uu leeyahay si ay u taageeraan in. siman yolked…
Wadsworth • January 2, 2014 at 3:52 waxaan ahay • Reply
Trip post Great.
Waxaan dhib arkaysid aad blog on my phone. Bogagga soo muuqan go'an caqabad ku bidix-midig boggan iyo erayadii dhamaadka line kasta u muuqataa off ka screen jaray sidaa darteed waxaan mararka qaarkood dareen ku xukuntay qaar ka mid ah ma samayn karaan. Ma hubo hadii ay tahay dhibaato la browser ama waxaa laga yaabaa in farsamo Mudanayaasha blog ee. Just doonayay in ay soo qaadaan wax uun incase waxaa la samayn karaa ka dhamaadka.
Gabadhayda jecel yahay aad music. Dhab ahaantii, Waa in aan qiro; Waxaan sidoo kale sameyn:). Markii ay marka hore ii soo bandhigay in booqasho music ay la socdaan aannu u jecel kale, lacris) Waxaan ahaa kaliya sidaas ku faraxsanahay in aad saamayn sida Ilaah doonayo via aad music. Laakiinse anigu waxaan ku hadhay xoogaa heegan. Yaabban haddii music muujiyey dabeecadaada. this Reading Waxaan ku kalsoonahay in aad tahay nin sida Ilaah doonayo. Waan ku baryayaaye, Iyo barakooyinka badan oo dad badan oo adiga iyo xaaskiisa qurux badan oo ina jeclaysto waayo,. Shaqsi ahaan hadlaya, iyo waqti ay jirto shar aad u badan, qowmiyadda waa xaq in. Mid ka mid ah waa run ahaantii nasiib u leeyihiin inay naag (haddii aad tahay nin) oo jecel Ciise iyo isaga u adeegta midig dhinaca idinka mid ah.
Adam Craven • January 26, 2017 at 10:24 waxaan ahay • Reply
AAMIIN!!! Waxaan run ahaantii marnaba la fahamsan sababta dadka qaarkood iska fududaysto qof dumar ah oo cibaado leh si fudud maxaa yeelay, iyagu ma ku haboon mid ka mid ah ay doorbidayaan galay. Waxaan leennahay walaal ah oo ku dhow dhigay doorashada ka hor farxad. Waxay ugu dambayntii u tageen inay ereyga cajiib ah oo ilaah oo tukaday oo ku saabsan iyo tukaday iyo ugu dambeyntii kacday iyada u jawaabay oo waxaan hadda 2 Walaalihiis oo ilaah weyn ka cabsada adeer!! Marna waa in aad door bidayso ee Ilaah hortiisa, maxaa yeelay qof walba markii ay asal ahaan waxaa ku candhuufay wejiga ilaah iyo doorbidida aan idin hor!!
TOD post daroogada!
Michael • October 8, 2014 at 4:48 waxaan ahay • Reply
Weli sheeko fiican jacaylka badan fiidkii.
DAY ALL sheeko fiican jacaylka badan Twilight.
ayay • October 31, 2013 at 6:23 pm • Reply
True waxaa :)
Sida Ilaah raadad, Waa in aan raaco. Waxaan u malaynayaa in kitaabku hadlayay waxaanu wada nahay tartanka hal, marka hore ka Aadan iyo Xaawo ka dibna ka dib dhammaan wiilashii Nuux. Waxaa dhici karta in kumanaan sano iyo boqolaal ka ab inay dib u hesho, laakiin dhammaanteen waa soo bilaabo meel ka mid ah. Mid ka mid ah tartanka, qowmiyado badan.
Waxaan si buuxda u heshiiyaan! Ka hor inta aan ninkayga la kulmay Waxaan mar walba doorbiday xiiro nadiif ah madaxdii cas, laakiin markaas waxaan la kulmay David. Waxa uu ahaa nin bidaarta silfar dheer oo ku filan si ay ii soohi! Waxa uu ahaa / yahay wax walba in Ilaah ii ballan qaaday ayaan ka heli lahaa in ninkeeda a, laakiin haddii aan raadinayey kaliya muuqaalka ah oo aan ku seegay lahaa on waxa ugu fiican ee Ilaah lahaa ii!
Sidee baan waxan u mahad. Anigu waxaan sugi iyocadhadii til la taaban karo ee, tani waa sida aan nimco ku sameeyo maalin kasta ka, buugga waxaa cowritten by Trip iyo Jessica!
Ceynaan • October 31, 2013 at 1:57 pm • Reply
Ku mahadsan tahay in aad safar for this article cajiib ah. Si aad u noqoto qof daacad ah aad la, Waxaan ahaa quruxsan yaabay markii aan ogaaday oo ku saabsan tartanka naagtaadaad. Laakiin, Waxaan aaminsanahay in qorshaha Ilaah ee nolosheena, ma had iyo jeer u dhigma waxa aynu ka filan ama aad rabto. Sidaas, qodobkan ayaa igu dhiirri-galiyay si ay u tukadaan oo aad hesho ujeeddooyinka aan xaq u; sidaa darteed marka qofka saxda ah ma iman weheliyaan waddadayda, Ilaah raalli, Waxaan diyaar u ahay. Waad ku mahadsan tahay mar kale Bro. Jacaylka aad iyo TOD aad ee Ciise. Ilaah ha barakeeyo.
Wow. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa maxaa yeelay, qalbigaagu furan oo daacad ah oo ku saabsan mowduucan, sida waan hubaa ahay ma la hagaajiyaa ku filan! Aniga, saygayga waa isku mid “tartanka” laakiin waxaan ka arki kartaa isla murankaasina wax doqon ah u ekaa xaaladda someones bulshada (nooca shaqada ay leeyihiin), haddii ay qabaan carruurta, waxa ay la soo dhaafay ayaa, iyadoo aan loo eegin madluum ay ku jiraan Masiixa ama ma. Waan ogahay xaqiiqda ah ninkayga aan guursaday lahaa iyadoo aan loo eegayn uu tartanka, status, ama asalka. jacaylka Ilaahay iyo nimcadiisa daboolayaa wax walba oo ka dhigaysa in dhammaan cusub oo qurux badan. Iyo sida aad ku tidhi, HE ogyahay waxa aan u baahanahay in ka badan ayaynu nafteena u samayn. Waad ku mahadsan tahay this post!!
Tani waxa ay ahayd…. Xorayn.
Absolutely qurux badan. Waxaan jeclahay in aad ku xusan sida aad door bidayso bedelay markii mudnaanta aad bedelay. Ilaah baa looga cabsadaa, Waxa uu leeyahay ee aad u fiican kasta oo naga mid ah, laakiin waxaan u baahanahay inaan ka baxo jidka noo gaar ah si aan u arki kartaa, helaan iyo iyaga maqsuud. Waxaan ahay naag madow oo aan daryeeli kari waayay yar oo ku saabsan tartanka. My salaada waa in la arko dadka Ilaah iyaga arka oo doonistiisa ku socdaan. In ay. Waxa uu noo gaare, kuwaas oo aan in cunsuriyad?
deerada • October 31, 2013 at 2:02 pm • Reply
blog Great in dadku u baahan yihiin in la akhriyo. Anigu waxaan ahay Lubnaan Armenian oo ninkaygiina waa madow iyo aannu dhex tegey oo ku dhaxjiraan badan oo murug ka qoyskeyga.
Weligay lahaa doorashada a of qowmiyadda. Ka hor inta aan la badbaadiyey waxaan lahaa 3 xiriirka halis ah oo qowmiyad kala duwan iyo ka dib waxaan helay badbaadiyey iyo koray in xiriirka aan Masiixa la waxa uu ahaa oo dhan oo ku saabsan qofka aan ahay “loo yaqaan” in la noqon; oo Ilaah uu leeyahay “amreen” ii.
Koritaanka waxa aan ahaa wax badan doorashada, balse looga baahan yahay by qoyskeyga in ay guursadaan aan qowmiyadda gudahood, laakiin anigu ma daryeeli; i waxaa had iyo jeer loo arkaa idaha madow si kasta…
Aniga in mattered ku jiray oo dhan waxa ay doonista Rabbigu waa naftayda iyo markii ninkaygu lay waxyooday inay I lahaa nabad noocan oo kale ah iyo sida a og in aan dhulka aan taagnaa. Waxaan weli ku tukanayeen, waayo, qalbigooda qoyskeyga in la jilcincy laakiin ugu danbeyn in arrimaha oo dhan waa inaan anigu ahay in doonista Ilaah iyo Jidkiisa iyo ma jiro meesha kale Waxaan rabaa in aan be..I ahay aamin oo xasiloon in doonistiisa.
Tani waxa ay ahayd Trip a post weyn. Waxaan marnaba dareemay xiiso aan qowmiyad gaar ah, Hispanic, laakiin sida aan ku koray badan oo aan rumaysad waxay noqotay mid sii muuqda Aniga in midab maqaarka ma aha arrin sida ugu badan. Tani waxaa u fudud in ay aqriyaan oo Ilaah ugu mahad naqayaa inuu idin siiyey sida qof dumar ah oo weyn si ay uga caawiyaan in aad sii tasbiixso. Thanks for waxyooday in fariimaha oo dhan!
Aniga iyo xaaskayga waxaan jira dad cad. Rabbigu nagu riixayaa korsashada ilmaha hore. In habka aad dooran karto waxa aad rabtid. Waxaa la gaaray sida gaaray baxay eey a. Anyway mid ka mid ah doorashooyinka aad u hesho in ay sameeyaan waxa loogu talogalay tartanka. Waxaan leenahay dhibaato ah kuma qabo tartanka kasta, Si kastaba ha ahaatee, halkaas oo aan ka mid ahay kuwa Way neceb yihiin dadka madowga ah. Sidaas ma aha waxaan doortay inay korsadaan ilmo madow, sababtoo ah iyaga ka mid ah oo jidka ah in ay la daaweyn lahaa marka aan iyaga dib ugu soo qaaday si ay u arkaan ayeeyooyinka aan. Oo aan marar badan la legdamayay leh doorashada in. Ma waxaan ka samayn wax sax ah? Ayaa waxaan ka nacaybka in ilaalinta our ilmaha, ama aan Ilaah nolosheena gaarka ah ciyaaro? Waxaan nahay raaxo leh doorashada in hadda, sababta oo ah waxay ka badan yahay, laakiin maxaad u malayn?
Waxaan akhriyey aad post… Waxaan ahay madow, oo waxaa lagu ansixiyay Waalid kuwaas oo u cad yihiin. Xitaa xaakinka kuwa maareeyay kiiska ahaa madow. Hoyaday iyo Aabahay ahaayeen habdhiska sababtoo ah waxaan ku noolaa meel aniga iyo mid ka mid ah walaalaha kale ee aan qaatay laga yaabaa in aan la sida laga nacaybka dadka dhawray. In la yiri, Ilaah ay isku halleeyeen, oo aan marnaba la kulmeen xaalado walaac.
Waxaan qabaa oo rumaysan in adiga, iyo naagtaada sameeyey wax wanaagsan ee qoyskaaga. Xaaladda kasta waa mid gaar ah iyo ahu na siinayo qiyaas Fadli maraan daqiiqado waaweyn iyo kuwa yaryar ee nolosha. In lagu dhiiri! Bal yaa og, waxaa laga yaabaa in aad heli doontaa fursad in ay qaataan mar kale iyo dooran madow ah (ama qowmiyad kale) ilmahaaga! Ilaah ogaa qalbiyadiinna ka dibna, oo waa inuu og yahay in la joogo.
Waxaan ka soo jeedaa qoys halkaas oo waalidka aan cad ku qaatay iman 6 carruurta madow. Waxaan qabaa inay aad u daacad ah, waayo, waxaad dhan in ay si dhab ah u aqoonsan yahay in la qaato ka baxsan tartanka ka dhigan tahay in aad leedahay si aad ula kac ah oo ku saabsan jidaynayey ilmahaaga in ay la kulmaan dhaqankooda, iyo sahamiyaan madowga. Haddii Ilaah uu si dhab ah aad u yeedhay inay eryadaan reer korinta ilmo madow, markaas waa in aanay noqon in ay fududahay in la qabto qoyskaaga aad saamayn ku soo baxay go'aan ah in. Si kastaba ha ahaatee, su'aalaha u baahan in la weydiiyo, waa go'aanka ay qaataan ka badan aniga igu saabsan, ama ilmaha oo u baahan guri? Baan ugu adkaysan karaa gadoodaan dhan oo ka yimid saaxiibada iyo qoyska in la iman carruurta la korsado ka baxsan tartankayga? Miyaan filaya ilmaha in hab iyaga ciidamada ilaa siin cidda ay yihiin xubin ka mid ah qoyskayga ahaan waa la sara kicin? Ayaan ka caymin doonaa meel ilmahayga si ay u awoodaan in ay danto iyada oo ay aqoonsiga ee ku nool inta u dhaxaysa Caalamka? Ma bulshada qotomiyey hab in dheeraad ah janjeero danaha ii isagoo qofka cad in ay qaataan ka badan baahida dhabta ah ee ilmaha? Sidee anshaxa waa nidaamka this?
Qabatinka ilmo macnaheedu waa wareeg ah arinkii oo dhan, iyo rarayo jirka haddii deegaanka aad ku sugan tahay ma naxa baahida ilmahaaga. Xiriirka u baahan doontaa inaad la dhisay kuwa soo socda marka laga eego ah in aad marnaba si buuxda resonate karaa (isagoo madow). Waxaan ku noolnahay adduun cunsuri, iyo in uu leeyahay in la sameeyo si ay ogaadaan inaad adiga iyo ilmaha aad kor by. Haddii aad dooratay in ay ma aqoonsana in, ka dibna aad ku jirto habab badan oo samaynaya dhaawac qotto dheer naftaada iyo ilmahaaga aad u anfaco. Korinta aan adiga kugu saabsan helitaanka si ay u badbaadiyaan ilmaha oo liita madow. Waxay ku saabsan tahay inaad la dhiiriyo soo baxay meel jacaylka iyo si dhab ah wax Nool wax qalbiga injiilka u heshiisiinta iyo inaad deriskaaga u jeclaataa. Tani ma aha adiga kugu saabsan, sida qofka cad.
Siyaabo badan ay yihiin uun dhawr su'aalood oo aad u baahan tahay in la hor fadhiisto. Haddii aadan diyaar u this iyo si ka badan inay ku dhiiradaan, markaas aan ku dhaqmaadka ilmo madow badan tahay in ay ahayd go'aan fiican. Waxaan posted maqaal hoos ku qoran in aad u ogolaanaya in ay waxaas oo hab qoto dheer su'aasha by Yeedha tartanka wadahadal iyo helitaanka bidhaamaysa adoptees iyo waayo-aragnimada ay.
Ma aha sheeko kasta waa sheeko guul iyo inta jeer kuwa aan sheekooyinka la maqlay. Anigu waxaan ahay nasiib waayo-aragnimada iyo qoyskeyga. Siyaabo badan, Waxaan la siiyay iyadoo fursadaha badan si ay u sahamiyaan oo aan fursado badan ahay, Si kastaba ha ahaatee, Waxaan ognahay in ay timaado kharashka iyo waxaan u baahan nahay in uu ka tago meel bannaan, waayo, in la hadlay oo ku saabsan.
land! “My doorashada ugu weyn waxay ahayd in naagtaydii ahaato cibaado leh, iyo Jessica ahaa. Sidaas daraaddeed iyadaan ku wifed.” line Best in blog ah. Ilaah ku faraxsanahay in aad u horseedi in ay naag weyn. :)
John Injiil • October 31, 2013 at 2:08 pm • Reply
akhristaha waqti dheer & dhegeyste. Commenter markii ugu horeysay. runtii waan jeclahay this article.
Reerkaygu waa Nigerian, iyo aabaheey a text random mid subax Tuesday ii soo diray at 4am leh “Haddii aad rabto in aad is guursanaayo, hubi in qof ka soo jeeda la mid ah sida aad tahay. at badan, isku wadanka.”
Dabcan, Anigu ma aan aqoonin wixii ay ku odhan, maxaa yeelay, waxaannu marnaba wada hadlay ka hor inta. #sirgaxan.
Waxaan ognahay in aan aniga iyo xaaskeyga jeclaan doonaa, markii aan diyaar u ahay, iyadoo aan loo eegin muuqaal, asalka jinsiyadda, caqabadaha luqadda, iyo wax kasta oo kala duwan kale oo suurto gal ah. Waxa ugu muhiimsan ee ila tahay in ay tahay qayb muhiim ah oo aan qoyska – qoyska Ilaah. Taasi waa ku filan.
Thanks mar kale!
hahaha. waalidiinta U Kaxeysto noqon kartaa adag on guurka . Laakiin qaar ka mid ah daryeelka siinin kuwa u guursado
saaxiibo • October 31, 2013 at 2:12 pm • Reply
Thanks for wadaago aad Trip wadnaha. Waxaan isku wada mid yihiin marka aan dharka maqaarka. Ilaah waxa uu abuuray oo mid kasta si siman iyo si gaar ah sida uu design gaar ah. Ilaah adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo.
Wax qalad ah waxaad la mid ah ayaa sheegay in Trip u guursanayeen oo qof tartan oo kala duwan oo ku saabsan. Waxa muhim waa in mar uun adiga ama aan guursan oo ay jecel yihiin Ciise (Mark 12:30 ESV) iyo in ay dib aad jeclaan doonaa, waana in aan jeclahay iyada sida Ilaah wuu jecel yahay Kaniisadda. Ilaahay ha barakeeyo aad safar iyo qoyskaaga
burburka Awesome ee sida Rabbigu joogta ah isu bedelaya ah “indhaha of our wadnaha” si loola safo “indhaha madax noo ah”. Waxaan la xidhiidhi karaa caqabadaha, inkasta oo aan weli ma guursatay, maxaa yeelay, naag cibaado leh kuwaas oo doonaya in ay ka farxiyaan iyada oo Badbaadiyeheenna ah ka muhiimsan yahay sifo kasta oo dusha. Hambalyo idinku wada dhacday ka sano oo Ilaah ku sii laga yaabaa inay u duceeyaan intiisa kale.
Waxaan maqli aad safarka, post wanaagsan.
Waxaan jeclaan lahaa in aan guursan ayaa laga yaabaa naag madow!
Thanks for the post! Runtii dhiirigelinayaa by your blog, i waxyoonay si ay u bilaabaan aniga ii gaar ah! Thanks.
post Nice!! Thanks
oo dhan waxaannu leennahay aabbe laakiin kala duwan hooyooyinka la mid ah dhiig la mid ah ciise waddaa noo ee,maqaarka waa maqaarka oo kaliya,laakiin waxa gudaha na arrimaha ugu ,wonderfull Trip Mr Lee.may Ilaah adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo, waayo, aad u waxyoonay wonderfull.
Wow! Anigu ma aan aqoonin aad guursaday iyo waxay tahay inay tahay dumarka cad, sida haweenka madow iyo dumar ah ee Ilaah, hambalyaynayaa on helo jacaylka dhabta ah! Waan jeclahay sida aad u sharaxay sababta aad u guursaday naag kuu, oo aad runtii ma aad leedahay, laakiin aad sheeko la yaab leh! sidaas si aad walaalkaa iyo naagtaada qurxoon Jessica, Waxaan jeclaan lahaa inaad guys sanado badan badan! Noqo barakaysan!
Waxaad samayn hal dhibic ka fiican! Waxaan leeyahay baran ka article in aysan macno ah oo ku saabsan midab maqaarka, laakiin waxa muhiim waa sida qofka waxaa la Ilaah iyo Heart socda!! Waad ku mahadsan tahay wadaago sheeko qurux badan.
Taasi macno kaamil ah. Maxaa kama dhigo dareen waa cunsuriyadda. Tan waxaa ka mid yahay tartanka kaliya, in cunsuriyad waa in ay ka gees ah tartanka aadanaha noqon. Waxaa jira dad kooxo kala duwan laakiin hal jinsi oo keliya laakiin tani waxay u muuqataa in ay dood laga badiyay iyadoo dadka waxaan kala hadlay in kastoo ay runta.
post Great, Trip!
“Marnaba ma aanan dooneynin in ay qiimeeyaan doorbidida aan guursadee waxa aan u baahnaa in naag.”
Noocan oo kale ah war qoraal ah oo run ah oo qoto dheer. Aabbahay waa madow, hooyo waa cad yahay, waxay soo guursatay 35 sano. Oo dhawr sannadood ka da.ay qaar ka mid ah sidoo kale laakiin dhexe ee dhaca, “midab maqaarka” ugu xaqiiqo ah ma laha. Rabbigu wuxuu mannaystay iyo aamin.
Trip, this post waa dhiig Bro. Waxaan ahay toddobaadkii ka dabaal aan sanadka ugu horeeya ee guurka naag cibaado iska maalin kasta i caqabadaha iyada u naxariistay. Waxay sidoo kale dhacdo inaan ka mid ahaado Laatiin, Faransiiska iyo Hawaii hufan. Sidaas akhriskaba this ayaa wax ku oolka ah.
Thanks mar kale, Jeff.
i dareemi tahay isla banaanka diilinta i ahay madow i ma doonayaan in ay guursadaan in aan tartanka hana i leeyihiin sababo aan i jeclaan noocyada kale ee haweenka
Waad ku mahadsan tahay la wadaago oo ku saabsan this daadiyaan iftiin. haddii cad, madow, iwm aad taabtay on waxa run ahaantii waa muhiim. ruuxii cunsuriyada ayaa naga hor joogsaday muddo dheer in badan oo ka mid ah meelaha. Waxaan aaminsanahay waxa aan jabiyay iyada oo si kastaba ha ahaatee. Ilaah ha idiin barakeeyo & qoyskaaga sii kordhaya.
la mid ah in aan sheekada. Thanks 4 dhajiyay
Waxaan leeyahay fikir, Anigu waxaan ahay Maraykan ah hooyo ( Hindiya) Aan u aragno sida aad leedahay oo aad samaysaan safar. Waxaan bartay ee Koonfurta Sheem. iyo dadka i weydiiso marka baad u socotaa si aad u guursato? Waxaan la jawaabaan “markii wakhtigii waa xaq oo i xaq u ahay”. Waxaan ku samayn indhahayga sii furan oo i odhan “waxaan rabaa naag cibaado noqon doona sidaa darteed jacayl la Ciise in ay sharaf doonaa eraygiisa”. Iyo arrinta tartanka uusan ku soo kor Laakiin waxaan idinku leeyahay way adag tahay in la helo naag isagu murweeya Ciise waa eraygii waa kan Native American aniga oo kale, maxaa yeelay, oo ka mid ah dhinacyada dhaqanka iyo saameynta of pentacostalism iyo nidaamka matriarchial dhaqanka Native American. Thanks for erayo aad
Krih • October 31, 2013 at 2:37 pm • Reply
Waxaan ku riyaaqay akhriska Trip post this. Anigu waxaan ahay taageere weyn u ah idinkaa, laakiin waxaan jeclaan xaqiiqda ah in aad u furan oo ku saabsan arrinta jinsiyadda. Daacadii, tartanka waa in aan macno ah marka ay timaado cida aan guursado. Waxa kaliya ee muhiim tahay in waa haddii ay yihiin Christian a, iyo haddii ay waafaqsan doonista Ilaah naftiinna. Ka baxsan daruuriga ah, jinsiyad ama midabka maqaarka waa uun kala duwan ee sida aynu eegno. Waxaan ku taariikhaysan ka baxsan tartankayga. Anigu waxaan ahay madow oo aan hore waa Korean / White. Marna ahaa arrin noo, Laakiinse waxaan xusuusan jeer marka aan aan helno dhaygag dadka kale. Waxa ay ahayd waayo-aragnimo xiiso leh, laakiin midkoodna niyadjabka (kaas oo ahaa badan) i joojin lahaa ka shukaansi qof kale oo ka baxsan aan qowmiyad ama iyaga u guursanayeen. Taasi marna ahaa arrin ila, aan qoyska ama saaxiib. Ujeedadu waxay tahay, waxaan oo dhan waxay leeyihiin door bidayso our, laakiin waa in aan xoogga saarnaa waxa Ilaah doonayo, waayo, nolosheena ugu horeysay. Nice in ay arkaan in wada hadal tani waa positive.
Ma jiraa hab gaar ah, taas oo aan kala hadli kartaa arrintan, aniga iyo u sida.
Waxaan Ilaah oo aad ku qoray maqaalka mahad sababtoo ah sida haweenka Christian hal, Waxaan fahamsanahay sida ay muhiimka u tahay in ay si buuxda u furan yahay waxa Eebe wuxuu leeyahay, oo ay ku jiraan oo uu u ogolaanaya in ay ku yimaadaan si aad noloshaada iyo xataa qaadataa soo baxay waxaa ka mid ah. Waxaan ka mahadcelinayaa qoraal ah in aad ka dhigay “waxaan leenahay in ay soo gudbiyaan hawadooda noo waxa Ilaah waxa uu rabaa inoo in xaaska”. Taasi laftigeeda gudahood iga caawisaa in ay xirto off my hab fikirka iyo gartay si ay diiradda saaraan waxa Ilaah waxa uu rabaa aniga iyo nolosha. Waxaan ahay madow iyo ku preferenced nin madow; Si kastaba ha ahaatee, Ilaah ayaa ka shaqaynaysa qalbigayga degaanka in tan iyo markii aan bilaabay in ay doondoonin isaga in la eego nin cibaado leh. Ka fikir sida dad badan oo run ahaantii dooran qofka qaldan in ay guursadaan ama xitaa ka maqnaan doona on kii Ilaah iyaga sababtoo ah ee ay xayiraad / rabitaanadayda. article Great! Waxaa si dhab ah ii barakeeyey oo waxaan hubaa in dadka kale aad u badan.
skeidgareeyo • October 31, 2013 at 2:48 pm • Reply
In ka Koonfurta iyo qomiyado, Waxaan kula macaamilooteen khilaafka ku saabsan shukaansi interracial badan. Haddaba waan tegi karaa isagoo wiil yar ah oo qurux badan Ilaah waxa qaar ka mid ah ka fiirsan khalad ama muddo yaraysto. Preciate aad ka hadlaya on this! Rajaynaynaa ninkaygiina waa sida aqbalayaan ii of sida adiga, iyo naagtaada ahaayeen kasta oo kale oo! 116!
post Good i qabaa in marar badan, ma aha daruuri in aanu door midab gaar ah ama asalkaad ka soo jeedo, waa waxa aad loo isticmaalaa in lagu. By aad sida isagoo Masiixi ah iyo jidaynayey Ilaah si indhahaaga u furay in aad laga helay wax ku wanaagsan. hambalyo Bro.
barakayn • October 31, 2013 at 2:51 pm • Reply
Trip post Great! Ma jiro qolka injiilka for cunsuriyadda.
Waxaan u maleynayaa in qabow oo caqli leh oo aad ku qorto this post. Waxay ka caawisaa dadka in jacayl ma yaqaan qaybaha awgood sida jinsiyad ama dhalasho. 1 Corinthians 13 ma wax ku saabsan loolanka odhan; waxa uu ka hadlayaa samir, hoosaysiinta, iyo xigmad. ups Big xilka weyn!
Dardaaranka • October 31, 2013 at 2:53 pm • Reply
Xuquuqda on! Tani waa duco. Waxaan weydiiyay, wejigooda arag ceeboobi, oo waxaan maqlay folks hadlaya sababta / sidee baan degeen ama noqday “Darwiish”. Waxaan ka baryay, waayo, qof dumar ah oo Ilaah caabuda oo isna wuu ii u diray. Waan jeclahay xaaskeyga, kuwaas oo ku dhacaya cad (Waxaan ahay madow). Waxay & carruurta waa hadiyaddayda weyn xagga Ilaah iyo Anigu taas ma doonayo hab kasta oo kale oo. Waad ku mahadsan tahay daacadnimo furan. Love ma dhammaan ka sarraysa.
Trip story Great iyo hambalyaynayaa. Waxaan jeclaan lahaa inaad uga yeelilahayn cad in aad doorato naag waxba kuma laha wax qalad ah in la noqdo ama ka maqan in qof dumar ah oo madow lahaa. Sheekadu waxay ka tago waxba kama jiraan ah oo ku saabsan aagga in. Sidoo kale, waa in la caddeeyay in laga yaabo in aad doorato of kaniisadda iyo dugsiga aad ku riday meel u noqon hareeraha ka yar haweenka madow. kiiyoo badan oo ku nool sida laga tirada badan yahay ee qaybaha bulshada oo dhan iyo waxa uu leeyahay saamayn ku yeelan guurka tartanka isla. Anigu shakhsi ahaan jeclaan lahaa inuu arko haweenka madow leh nin madow oo tayo leh, laakiinse anigu uma aan ku doodi karaa wixii Ilaah isku xidhay. rabitaanka Best adiga iyo qoyskaaga b inay
blog aad u fiican. Waxaan ku socdaa u leeyihiin in ay isticmaalaan ereyga “WiFi” hadda. si xushmad leh, Dabcan.
Xaaskeyga & cad waan yihiin… waxaan leenahay 3 carruurta cad iyo 1 ina Afrika (Itoobiya). Waxaan aad u hesho qaar ka mid ah su'aalo isku mid ah iyo dhaygag cajiib ah, laakiin aynu ognahay naloo Ilaah ka dhigay inay ahaadaan qoys!
Waxaan tixgelinaynaa in daacadnimo iyo furfurnaan in doonista Ilaah ee noloshaada… oo waxaan u malaynayaa waa meesha ugu weyn ee aad article – Raadinta doonista Ilaah halkii aannu doorashada u gaar ah!
Aragtidani waxa ay kitaabiga ah waxay noqon kartaa “guuriyeen & dhejiyo” in dhinac kasta oo nolosha ah Mu'miniinta… iyo waa in!
Waxaan idinku bogaadinayaa aad rabitaankooda in ay wadaagaan aad “sababaha” guurinayay ka baxsan tartanka. My fikirka ugu horeysay, sida nin guursaday naag Asian, waxaa maxaad aad dareento baahida loo qabo in qiil si QOF. Dabcan, iyo xaaskeyga ee’ midab maqaarka la mid tahay, soo jeeda iyo barbaarinta si ka fog yihiin, qaar kalena kasta, qof kasta oo la odhan karaa “maxaad u guursado?”Sida aad ku xusan, naagtaada, waa naagtii THE, helpmate THE, kale ah (haddii afadayduna waa reading, “WANAAGSAN”) badhkiisa, waa in uu siiyaa. Eebe kuwa nolosheena in aan u baahanahay in ay leeyihiin, si ay noo ka doodid si ay u sameeyaan noo wanaagsan. Sidaas waxa haddii uu qof u muuqataa duwan iga dusha. Adiga oo kale, waxaan waa in dhammaan la doonaya kuwa Ilaah qalbi doonaya in uu yahay sifo ugu quruxda badan hal hantiyi karaan.
isagoo • October 31, 2013 at 3:18 pm • Reply
post Great. Si aad u noqoto qof daacad ah waxaan aaminsanahay in badan oo masiixiyiin ah oo dheeraad ah haweenka Christian gaar ahaan hal (aniga qudhaydu ka mid ah) waa la guursan lahaa ama laga yaabaa in si degdeg ah lagu guursaday haddii aan helay takhaluso qaar ka mid ah fikradaha naga gacmeed. Just dhawaan ayaan bilaabay in ay Ilaahay ka baryayaa Waxaan doonayaa in aan ur fiican. Waxaan leeyihiin in ay ku kalsoon tahay our samaawi ah Aabbaha in uu ogyahay waxa aan u baahanahay. wax My weyn ayaa waxaan doonayaa inaan guursado, in Ilaah ka cabsada oo aan jeclahay sida u sheegay in wax ugu weyn ee baddelo tartanka inkastoo Ilaah waa ina barakayn doonaa damacyada aan qalbigeennu. post Great n Ilaahay ha barakeeyo
shaqo badan oo is muujiyaan oo kaliya, laakiin si ka sidaas samaynaya in dadka kale fahmi doontaa. Markii aan bilaabaan inay bedesho our aragtida nolosha guud, waan arki doonaa badan oo waxa aan ka mid ah “filan” waxba u qaban la doonista Aabbaha. The u dhaw inaynu isaga si, ayaa in ka badan iyo in ka badan our “laga filayo” beddelo sababtoo ah waxa ay bilaabaan in ay saf ugu jira la HIS doonista iyo ma noo gaar ah. Ilaah adiga iyo qoyskaaga ammaan. Ka dhig samaynaya waxaad samaynayso walaalkay in Masiix. Black, caddaan ama guduud, midabka door ma marka ay timaado jirka ka mid ah ee midnimada Masiixa. Waxaan la duceeyey nin cajiib ah oo Ilaah, kuwaas oo ku dhacaya ahaan qowmiyadda Isla, laakiin in ka badan wax uu yahay nin ah Ilaah qalbigiisa gaar ah kaas oo ay tahay in arrimaha in aan kitaabkayga oo dhan.
Trip Thanks! Waxaa run ahaantii helay iga fekerayo aniga ii gaar ah la door iyo sida waqtiyada Waxaan dhawray dhererka gacmaha ka mishinka wanaagsan qaar ka mid ah oo kaliya sababtoo ah ma aanan muuqda iyaga soo jiidasho leh. Points arrimaha kibirka. Laakiin dhab ahaantii lagu dhiiri by comments ka taageeraya xiriirka interracial. Waxaan jeclaan lahaa qoyskeyga la wadaago views kuwan. Haddii aan guursato nin madow, ma noqon doonaa mid sahlan.
Waxaan qabaa inay wax weyn oo aad u fiiriyey midabka maqaarka ee la soo dhaafay iyo qowmiyadda. Anigu ma istaagi kara marka dadku qabso in oo aad rabto in uu sii joogo gudahood ay tartanka sabab kasta oo. Waxaan nahay dad la midabo kala duwan ee maqaarka oo dhan by dembi saameeyeen. My gabadha waa Isbaanish iyo waxaan ahay madow laakiin marnaba ma fiirin doonaan iyada oo ku arko qof dumar ah oo Isbaanish, Waxaan eegi iyada at oo kaliya arko qof dumar ah, iyadoo aan loo eegin midabka maqaarka ama qowmiyad.
Aamiin. Waxaan u duceeyey by jawaabtaada. Marka waxaan leenahay xiriir la Masiix, Doonistiisa uu noqdo our doonista iyo doonistiisa ahaa idiin Naagta xaaskiisa lol…. (haddii xataa macno). gaar ahaan wuxuu iyada loogu talagalay idinku sugan-qeybsanaan ku xigeenka. Waxay u badan tahay dhaco badan oo Flack for u guursanayeen oo a “madow” dude, Laakiinse Rabbigu wuxuu ogaa dhab ahaan waxa ay labadiinaba aad loogu baahan yahay. Raadi isaga ugu horeysay oo waxaas oo dhan waa laydinku dari doonaa ilaa (ay ka mid yihiin xaaska saxda ah).
Joog walaalkiis barakaysan iyo sii wadaan in ay noqon barako u tahay dadka kale iyo sidoo kale.
Ilaah ammaan aad Trip Midowga.
Waad ku mahadsan tahay wadaaga aad waayo-aragnimo shakhsi.
axdiga ilaahyo Guurka ma ka kooban midabka ama tartanka. Uu Love weligeed ah oo dhan ka badan..
Sidaas ku faraxsanahay in aad this posted. Sida wax soo saarka ee guurka bi-isir iyo naagtii nin aan fikiri mid iyaga ka mid ah :) mawduucan waa mid aad u dhab ah ii. Ilaah ayaa ii barakeeyey sii la ninkayga, oo waxaa i xanuun in ay ka fekeraan waxaa jira kuwa soo baxay waxaa diida lahaa wixii Ilaah leeyahay iyaga sababtoo ah waxay qaladkoodii u gaar ah / cunsuriyadda.
line jecel: “Sidaas daraaddeed iyadaan ku wifed.” LOL!
Maxaa article weyn, iyo Im ku faraxsanahay in ay jiraan dad halkaas aad sida kuwaas oo kor u furan wadahadalka ku saabsan mawduuca sidaan oo kale ah iyo isagoo dhabta ah u leh, maxaa yeelay, waxaa had iyo jeer u muuqataa in dhaleeceynta ah lagu lifaaqo xiriirka interracial.
Waxaan ahay Shiinaha oo ninkaygiina waa madow, iyo halganka aan ku aragnay, oo ay la socdaan our wada safarka ay ku adag iyo tijaabo dhab ah. Waxaan guursaday oo yaryar oo kaliya adiga, iyo naagtaada sida, waxaan ahaa 21 wuxuuna ahaa 24. Waxaan leenahay 2 gabdho wada, iyo marka Im soo baxay oo keliya iyaga la, doonaa baan uga joojiyay in jidadka iyo shisheeyayaal noqon lahaa sida “waa madow ah abo?”
Inta badan halganka oo dhan ayaa la qoyskeyga, maxaa yeelay, iyagu marnaba kuma fekerin in aan guursan lahaa nin madow. Waxaan lahaa arooska yar iyo in ka badan nus ka mid ah qoyskeyga diidday inay ku timaado. Laakiinse Ilaah waa la yaab leh, sababtoo ah iyada oo loo marayo oo dhan ka mid ah in, iimaanka hooyadey ayaa isku dayay iyo tijaabiyey, degaa qoyskeyga gudahood ayaa la bedelay. Ninkayga ayaa hadda aqbalay, iyo hooyaday isaga ku qiro lahaa sidii wiilkeedii sharciga hadda (taas oo ah heshiis aad u weyn inoo ah!) Weli waxaa jirta qaar ka mid ah si ay u tagaan, laakiin si ka badan ayaa u gudubtay in aan siiyo oo dhan inay Ilaah ammaanaan. waxaa sii Trip, aad tahay waxyi ah in dadka kale oo aan ilaahay ka baryaynaa in ay sii wadi doonaan inuu idin barakeeyo, qoyskaaga iyo adeegiddaada.
PS: Waxaad u baahan tahay si ay u soo degin inuu oofiyo ee London, UK time qaar ka mid ah!!
Si aad u wanaagsan ayaa sheegay in. Xaaskeyga waa Isbaanish, Waxaan ahay cad. Race marnaba yimid fikir ii for aad u badan waxa aad sheegtay markii aad la kulmay naagtaada; Waxaan arkay hamiday naagtayda waayo, Ilaah, iyada jecel yahay inuu ardayda wasaaraha, waxaana ku riyaaqay badan oo ka mid ah filimada isku mid ah iyo music iyo u baryay kasta oo kale oo lagu jiro shukaansi. Ma heli sababta dadku u maleynayaan guurka interracial yihiin “cajiib ah”.
Thanks for taageerayaasha aad la wadaago oo la siiyo dhiirrigelin.
Tani waxa ay ahayd mid laga cabsado! Waad ku mahadsan tahay qaybsiga safarka. jacaylka Ilaah leeyahay doorashada gaar ah ma jiro, laakiin u samatabbixiyaa. Youre story ahaa duco.
maragga Beautiful! Daacadii this ila hadlay oo in kastoo aan dhahnaa waligood doorashada jinsiyadda ama wax la mid ah, weli oonu la ii sheegay in Ilaah ku siin doonaa waxa aan BAAHAN, qasab ma rabaan. Waxaad tahay waxyi run iyo marag nool oo awood bedelitaanka nolosha ah Ilaaha. Ilaah aad iyo aad u qurux badan TOD yar ammaana!
Wonderful article, Trip! Commenter markii ugu horeysay halkan!
Waxaad sidaas ku jira dhibcood marka aad tidhaahdaan, “Marnaba ma aanan dooneynin in ay qiimeeyaan doorbidida aan guursadee waxa aan u baahnaa in naag.” Mararka qaarkood, Waxaan dareemi looma eego sida dumar ah sababtoo ah shakhsiyadda iyo dabeecad waa hab gaar ah. Waxaan ahay waxa laga yaabaa in aad soo wacdo “cajiib ah” ama “kala duwan” sida ay dad badan waan ogahay. guys Qaar ka mid ah sida gabadh kuwaas oo ay wax yar ka badan geliyey fashion caadiga ah ama qof ay wax yar ka badan bulshada iyo warka badan badan, anigu waxaan ahay. Marar kale, Waxaan qabaa in laga yaabaa in aan samaynta naftayda ka yar laga heli by gaar ah fikradaha faquuqaya aan wax yar. siyaabo kuwa aan ku salaysan jinsiyad, laakiin badan oo ku saabsan qof ee asalka ama hab gaadiidka… maxaa yeelay, waxaan baska dugsiga, oo anna ma aan mahad ha markii nin isku dayo u rumowday ila saaran gaadiidka dadweynaha. (Fikradda waa in haddii sida nin fuushan baska ama tareenka, aadan awoodi karin in aad hesho baabuur iyo eryi mid, aad leedahay lacag yar ama aad u faqri ah oo ku saabsan wax qalad ah, oo sidaas daraaddeed ayaa ganacsatada isku dayaya in ay ka hadlaan udgoon ii ah. LOL… laakiin tani sidoo kale waa qalad.) Waxaan ku tukanayeen in Rabbigu i soo caawisaa inuu sii joogo doono naftayda, sidaa darteed markii wakhtigii la yimaado qof in qaarkood in la helo “wax wanaagsan,” Waxaan diyaar u noqon doonaa. :)
Ilaah ha barakeeyo, Bro.
June • October 31, 2013 at 5:25 pm • Reply
Waxaan gebi ahaan ku raacsan tartanka in waa in ay ahaataa mid ka mid ah kuwa la door gacanta u furan, laakiin waxaan ku heshiin ha in, ama wax kale 'doorbidida’ waa wax aan waxba tarayn marka la isku dhaca wax ka qabashada. Nasiib darro, in aan waayo-aragnimo, waxa aan dareemay ahaa doorashada gacanta u furan, oo waxay isku dhiibay ay guushu ku, nin cibaado leh oo i hor yaal,noqday il daran xiisadda ee aan guurka, sannado badan ka dib, markii ninkaygu helay unahay ah oo miisaankeedu yahay, on top of waxa aan hore u tixgeliyaa ahaa jir ah u cayilan. Waxaan mar walba la soo jiidatay noocyada ciyaaraha fudud more, sidaa darteed markii aan soo wajahay miisaanka xitaa ka badan faa'iidada, waxaan qirayaa, Waxaan la galmada demiyo. Taasi waxay keentay in isku dhaca, iyo colaadda ka dhigeen doorashada noqday buur. Halkii isagoo doorashada jirka fudud aan meel iska dhigay ay guushu ku sawirka weyn ninkii cajiib ah oo Ilaah, isagu waa, colaadda naloo isagoo ku saabsan ma i isagoo xamaasad ku saabsan galmada, dareenka dhalisay in aan 'bixiyey’ wax la taaban karo oo muhiim ah oo lagama maarmaan ahayd, oo hadda soo wajahay isagoo u noqon lammaane baarri oo jecel galmada qof aan ka jawaabin laga yaabaa in ay jir ahaan. nimcada Ilaah oo keliya ayaa naga soo dhex mariyey ilaa hadda, laakiin, daacad ah, jidhkiisa weli waa jeedo weyn off, oo weli waxaan jeclaan lahaa in aan u dhegaysanayay in aan doorashada iyo sugayay qof ku haboon nooca jirka aan, iyo sidoo kale baahida loo qabo in aan nin sida Ilaah doonayo
iyo, laakiin waxaan doonayay in aad guursato. Good idiin kasta. Bad ii..
Sida qof multi-u orotameen, Waxaan ka Bixin carruurta ah iga eego dabeecadda qofka marka aad dooranayso ah ninka / iyo ka yar oo ku saabsan midab ee maqaarka. Sababta oo ah in ay ku taariikhaysan dhamaan dadka kala isirka iyo la kulantay dhaqamo badan. My comment ayaa had iyo jeer inta ay ula dhaqmaan si ixtiraam leh oo u jeclahay, Bal yaan ahay anigu in aan kuu sheego in aanad qof in ay noqon kartaa ku salaysan midabka maqaarka.
Waxaan ku leeyahay in qaybta aan ugu xiisaynaayo blog this yahay bayaankan halkan, “Marnaba ma aanan dooneynin in ay qiimeeyaan doorbidida aan guursadee waxa aan u baahnaa in naag.”
xaq in ay jiraan waxa ay soo koobaysaa!!!!
War wanaagsan! Iyadu waa inaanay xataa “white”! Oo aadan xataa “madow” Trip. marka la eego waa kuwa jimbaar. Ilaah ku ammaanaan waxa aan dhamaanteen ka mid ah tartanka aadanenimo. Xataa in kastoo aannu nahay qowmiyado kala duwan, waxaan ka heshiiyey Masiix! Aamiin Bro. article Good. Mid ka mid ah dhiigga. Mid ka mid ah Wiilka.
Awesome! Thanks for this qoraal. Waxaad tahay dhiirigelin caynkaas ah, oo Ilaah waan ammaani jiraan lamaane cibaado leh adiga iyo xaaskiisa waxaa sida. Sidoo kale, Waxaan hubaa in wada, waxa aad awoodi kartaa in ay gaaraan dadka badan oo ka badan inta aad awoodi doonaan in ay gooni. Ka dhig Ciise reppin.
Xusuuso: Waa maxay sababta uu guursaday White Girl a by Trip Lee | 9jagirl4real
Tani waxa ay ahayd sidaa darteed laga cabsado in ka akhriyi! Aad yididiilo. Anigu waan kula macaamilooteen comments disppointing iyo rasist. Ninkeyga waa cad iyo madow ayaan ahay. labada Waxaan ka Caalamka gebi diffrent iman. Waxaan marna kuma fekerin inaan guursado lahaa meel ka baxsan tartankayga. Waxaan xitaa shakin tukaday in Ilaah i arkay nin madow leh yaalo lol. Laakiin Ilaah baan mahad waa yiqiin waxa ii fiican aniga iyo barakaysan aan la kaliya nin caddaan laakiin boqorkii dhulka aan! Tan iyo markii aan la guursaday runta ah waan ku fahamsan yahay waxa ay tahay in kuwan jidhadhka dhulka jeclahay. Ma aha inaad u sheegto BIZ oo dhammuba aannu marno laakiin waxaan la dhibtoonayay arrimaha bacriminta iyo Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, ninkeedii maxaa yeelay, wuxuu sii waday in ay igu dhiiri-. Waxaan jeclahay in aad music iyo adeegiddaada. Ilaah adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo!
Anigu waxaan ahay cad, oo ninkaygiina waa madow. Marka i isaga soo bandhigo inta badan dadka ay sugaan illaa uu ka tago in la yidhaahdo “ayuu isnt waxa i filayaa!!” si ay iigu waalan isticmaalo. Like, kuwaas oo si aad u xukumi guurka. Haddaba i kaliya diidaan oo waxaad ku tidhaahdaan “ayuu wasnt waxa i filayaa midkood, laakiin waan ogahay 100% in uu yahay mid ka mid ah Ilaaha ii soo diray” ay u fiican in la ogaado in aad aproach. Oo kaliya ogahay taageerayaasha aad run garanayo sababta iyadu waa naagtaadii.
Taasi “Martin” Comment ayaa igu diidanaa dabaqa Qosli…laakiin xaqiiqdii waxaan dareemayaa Blog this dhan!! Man muuqataa on baxsan oo Ilaah u muuqataa wadnaha. Xaaskeyga had iyo gooraale u tahay in qalbigu naagta A waa in si qarsoon ee Ilaah. Oo nin wuxuu haysto inay Daa'uud doondoonaan in Order si dhab ah iyada Raadi…
All oo lagu baabtiisay Masiix, waxaad huwateen Masiix, ma jiro Yuhuud ama Greek, Scinthian mana Barbari. Tani waa runta daaha ka qaaday in amar qoraal quduuska, Si kastaba ha ahaatee, Mu'min badan weli “unrenewed” maskaxda in. Maxaad qowmiyadda weli waa arrin. Waxaan sii wadi doonaa in koray fooli dhalashada ilaa Masiixa la abuuri na oo dhan.
ereyga Good! Jacaylka xiisaha qoyska. Barako!
aniga oo aan weli guursaday laakiin wax badan oo ilma adeer ah waa Oo iyaga waa la guursaday in dadka ka soo jeeda jinsiyadaha kala duwan oo dhan adduunka oo dhan ka. Waa si qabow in qoysaska la samayn karaa ee aad u badan oo midabo kala duwan hargahood. Waxaan qabaa in guurka interracial yihiin si qurux badan maxaa yeelay, waxay ina xasuusinayaan in aynu nahay dhamaan caruurta uu si siman oo si qurux badan u abuuray. Rabbigu wuxuu eegayaa wadnaha iyo sidaa darteed waa in aan sida aadanuhu in saaxiibtinamada iyo cilaaqaad jacayl.
Tani waxay u waxyoonay oo wuu u duceeyey ii siyaabo badan oo. Waxaan jeclahay inaan arko lamaane interracial / guurka! Waxaa had iyo jeer ahaa waxaan jeclahay sida naag madow in ay guursadaan ka baxsan tartankayga. Waxaan ku hanweynahay inaan maalinta aan la kulmo oo aan xaas garanaya uu gacanta ku soo gaaray oo loogu talagalay ii! Waxaan leenahay si aad u hesho si ay u meel in kor ku xusan kale oo dhan halkaas oo waxaannu u jeesanaynaa dadka Ilaah iyo aqbalo Waxa uu inoo qabo oo dhan. Sure waa OK si aad u weydiiso ama Ilaah u sheeg waxa u rabto ama sida. Qod this Waxa uu hore u yaqaanay. weli Better wuxuuna ogyahay waxa wanaagsan noo. Sidaas daraaddeed waxaan u leeyihiin in ay noqon fikirin waxa aynu weyddiisanno ama ku barya, waayo. Maxaa u rabto ma aha had iyo jeer waxa ay u baahan tahay! Ku kalsoon tahay Ilaah weyddiisato oo aad loo yaqaan oo u oggolaan isaga inuu sameeyo wixii uu sameyn!
runtii ku faraxsanahay in aad guursatay Jessica Waxaan ahay. Iyadu waa qof la yaab leh qalbigiisa oo la yaab leh. Waxaad laba saamayn la yaab leh oo ku saabsan dadka sida laba qof oo is qaba, kuwaas oo jacayl leh kasta oo kale oo Ciise. Just aad baad u mahadsan tahay for raadinaya wadnaha oo aan midabka wejiga.
Trip, oo dhan i dhihi karaa waa heer sare, erayada ma sheegi karo farxadda in isagoo kula hufnaan sida ku saabsan sababta aad u guursaday naag kuu wadaagaan, Tani waxay run ahaantii dhacaya si ay u caawiyaan kuwa arko marka laga eego kale oo kan laga yaabaa in ku raad-guurka mustaqbalka. Ilaah run ogyahay waxa wanaagsan noo. sayidkaygiiyow ay sii wadi laga yaabaa in naxariisi korkiisa ha qoyskaaga!
áAtiya • October 31, 2013 at 8:25 pm • Reply
qurux badan & yaab….
Trip, waad ku mahadsan tahay runta ku wacdiyaya in sheeko xumeeyay iyo shaqsi ahaan ii. in kastoo aan ahay im madow had iyo naftayda oo la sawiran qof jinsi ka duwan. laakiin i Ilaah ayaa si tartiib ah wax looga qabto ila tahay in la aqbalay ee jinsi kasta iyo in waxa ugu muhiimsan waa inuu qalbiga ka tarjumaysaa in Masiixa. Hooba ah waxa ugu muhiimsan. Plus aad leedahay jacaylka buuxda iyo taageero kiniisadda gurigaaga my. waxaan ka buuxa lamaane qomiyado kids isku qasan. oo lagu daray i leedahay saaxiibo badan oo isku darsanaa oo waxaa dalka buuxdhaafay lol. dhaqsaha badan ku faani aad ee ilaa taagan iyo adduunka u tebiya waxa ay u baahan yihiin inay maqlaan :)
Waxaan ku riyaaqay reading this post, Trip. Waxaa ku dhufan dhow guriga. Waxaan ahay sidoo kale in guurka ah interracial. Anigu waan madoobahay (Jamaica, Native American, isirka ay socon karaan) oo ninkaygiina waa Hungary, Jarmal, iwm-si uu cad. Waxaan mar walba ogaa anigu ma guursan lahaa nin madow iyo, ma aan ogayn waxa tartanka ninkayga mustaqbalka noqon lahaa. Sidaas oo kaliya adiga oo kale, Waxaan u tegey college inuusan dooneynin inuu taariikhda laakiin si ay u koraan sidii Masiixa-raacsane oo ay waxbarasho helaan iyo waxaan la kulmay oo u dhacay jacayl la lab cad yar yar gaar ah.
Markii aan bilowday xiriirkooda, dhowr bilood aan ku ogaa waxaan guursan lahaa maalin maalmaha ka mid oo aynu ku samaynay oo kaliya in dhowr sano ka dib. Shafar ayay ii aheyd filan si ay u koraan meel kala duwan oo ay leeyihiin xubnaha qoyska kuwaas oo ku jiray xiriirka interracial si, uu midabka maqaarka marna ii joojinayaa. isaga waan arkay, waayo, kii uu ahaa; nin cibaado leh oo qalbigiisu waxaa ka buuxay jacayl, hoosaysiinta iyo naxariis. Wuxuu eegay ee la soo dhaafay midabka maqaarka aan sidoo kale, eegaya qalbigayga oo i arkayn intii qofka aan ahay gudaha. Shaki kuma jiro in Ilaah na soo wada keenay. Waxaan karin ayaa ninkeeda ka fiican gacanta lagu gaaray nafteyda ee maalinta loo qabto. Haa, Waxaan laga yaabaa in la door aan sidoo kale waxa aan ninkayga doonayay in ay noqon, laakiin runta waa, Ilaah run ku sameeyey i siiyo wax badan ka sii badan waxaan u qalmaan iyo si ka badan in aan marna ogaa xitaa waxaan rabay.
Waxaa jira jeer marka isagoo labo ah interracial muuqataa sirgaxan xaaladaha qaarkood, laakiin markii ugu danbeysay ee aan hubiyaa-aan oo dhan dhiig midab isku mid.
“Ma jiraan wax ay daruuri ka qaldan isagoo door bidayso, laakiin waxaan u leeyihiin in ay iyaga gacanta furan leh.” xigasho Great xididka kasta oo nolosha!
Waad ku mahadsan tahay this dhajinta! Waxaan ku raaxaystaan ​​daacadnimo iyo hufnaan. Ilaahay ha barakeeyo ee labadiinaba aad!
Aad ayaan ugu mahadcelinayaa loogu talagalay dadka doonaya in ay dhegeystaan ​​Ilaaha xagga sare jooga bulshada ee dhinac kasta ee nolosha iyo oggolaadaan fikirradoodii inay u ekaadaan doonistiisa iyo Jidkiisa. inta badan waxaan u maleynayaa inaan xitaa ma oga sanduuqa iyo xuduudaheedu in aan nafteena on. My qoyska ahayd military si aan u joogey colorblind qaybta ugu dhammu u soo kordhaya. Si kastaba ha ahaatee ee la door South iyo sumadaynta boqor ugu sarreeya, inta badan… xitaa waxaan lahaa saaxiib nin ku dhow in college ii sheeg in aan ugu quruxda badan, smart, Gabar la yaab leh ayuu u jeclaan marey laakiin waxa uu kaliya marnaba u maleeyey inuu taariikhda ku lahaa a ___( geliso tartanka halkan)___ gabar. Ayaa Iga WADNAHA. hah iyo anigu kama aan xitaa isaga jeclaan jidka in. Waan ku faraxsanahay in aad adigu iska ogol yahay in ay ku dhici jacayl iyo waa markeeda obediently dadka kale furitaanka sheekadaada kor.
Numbers 12:1-11…Looma baahna in aad naftaada qiil u ah Dadka Bro, doonayaan in ay muujiyaan naftaada ansixiyey Rabbiga. Qalbi daahir ah & aaminnimadaadana xagga Rabbi Ciise ka bixi doona ama erayo nin kasta oo SPEK kartaa in aad ka dhanka ah.
Yo safarka u yihiin man.I sidoo kale ha same.lol.I ku guursan doonaa, sayidkaygiiyow, iyo midabka maqaarka tartanka doonaa,e.t.c ahan doonaa in alla intii uu cibaado u one.GOD u barakeeyo nin.
Lindsey • November 1, 2013 at 12:00 waxaan ahay • Reply
Its si dhiirri-galinaysa in ka akhrisan. Waxaan ahay cad oo ninkaygiina waa madow, oo waxaan ku nool nahay deriska ah inta badan Isbaanish. Waxaan leenahay 2 gabdhaha qurux badan laakiin sida aad qiyaasi kartaa waxaan ka heli unahay of looks. qoysaska Our u gaar ah waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh negative waqtiyada. Laakiin waxa ugu muhiimsan ee aan ka bartay waa in inkasta oo ay jiraan kala duwanaanshaha dhaqanka (gaar ahaan marka ay timaado korinta carruurta), waxa ugu muhiimsan waa in qalbiyadeenna iyo dooni la Ciise.
FortuneLawrence • November 1, 2013 at 1:20 waxaan ahay • Reply
Waxaan sidaas u duceeyey aad Trip post!
Waxaan su'aal ka qabto in kastoo. Anigu waxaan ahay Afrika(madow) Marwada oo aan door bidaan guys cad madow. Taasi waa inta badan sababtoo ah waxaan si raaxo leh qaar ka mid ah dhaqanka ee dalkiisa hooyo ma ihi. waa waxaan idinku leeyahay, Waxaan nin madow jeclahay badan laakiin sida aan sheegay, dalkaygii waxay leedahay qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin doqonimo. Doonaynin waxaad tidhaahdaan qaldan ee samaynta rabitaankayga sida aan ahay?
Julia • November 1, 2013 at 1:53 waxaan ahay • Reply
Trip article Great. Waan jeclahay waxa aad sheegtay oo ku saabsan tartanka aan arrin. Waxaan ahay cad ama ugu yaraan u eegto in dadka intooda badan. Waxaan la sara kiciyey guri qomiyado…hooyaday waa Talyaani iyo Hispanic iyo aabaheey ahaa white. Anigu waxaan hadda shukaansi nin cajiib ah oo madow oo aan haysan arin la aan ii isagoo tartanka la mid ah sida isaga. Wuxuu ii arkaa sida quruxda badan. Haweenka Black dhanka kale ii arkaan khatar ku ah. Oo kolkay i arkaan oo kaliya sida cad…hadday ogyihiin runta. Waa in aan macno ah waxa tartan aad tahay in arrimaha oo dhan waa in qofka 5Markaasuu u guursadaan aad Mu'min ah. Thanks mar kale maqaalka.
Daniel • November 1, 2013 at 6:27 waxaan ahay • Reply
Waxaan si ay u isticmaalaan Aayado loo isticmaalaa in lagu niyad noocan oo kale ah guurka. “Aadan iyo Xaawo ahaayeen u badan tahay midab isku mid / Samson aabihii doonayay in uu guursado qof ka mid ah dadka Israa'iil / Aabaha dhalay Isxaaq u tageen inay dhererka weyn naag ku heli ka mid ah dadka uu’ waayo, Isxaaq, iwm…”
doodaha ku saabsan mawduucan My ahaayeen naxariis laawayaal, gaashiya leh iyo - arrin daacad ah - raad.
Oo markaas qalbigayga Ilaah beddelay oo i geliyey xaalad halkaas oo aan lahayn doorasho laakiin in ay ku tiirsan isaga on. Waxa uu i baray waxa ay tahay in ay ku kalsoon tahay isaga in. Iyo in markii aan bilaabay qiimaynta kuwa igu wareegsan oo sidoo kale kuwa isaga isku halleeya. Waxaan seefqaad ah oo u dhaw in dadka Ilaah - iyadoo aan loo eegin asalka dhaqanka - iyo dhacay jacayl xertiisii ​​maxaa yeelay nimcada leh, rumaysadka iyo jacaylka ay muujiyeen.
Iyo in sida American this halaagsameen u guursanayeen oo qurux badan a, Gabar Brazil cibaado. Waxay ahayd 10 bilood oo Ilaah ayaa na barto labada aad u badan! Waxay ahayd xiriirka udgoon ayaa cadeeyay in ka badan oo mar kale in ka badan: siyaabo Ilaah ugu fiican yihiin, marka fahmaan waxaa jirrabaysaan.
Tracy • November 1, 2013 at 8:05 waxaan ahay • Reply
Waxaan mar walba la yaabay sida ilmo dareemayo ay darin. Waan ogahay aniga ahaan waxaan jeclaan lahayn in aan si buuxda hal jinsiyad ama kuwa kale ee. Waxaa uma dhaxeeyo lahaa taas oo, Chinese, Eskimo, iwm Indian. Waa su'aal, weligay ma aan maqlay ka hadlay.
ELVISNIXON.com • November 1, 2013 at 8:17 waxaan ahay • Reply
Mid ka mid digtoonyey:
Hungary waa Magyars. Magyars nahay farac lineal of Attila Hun ah (Halkan ereyga Hungary) kuwaas oo badanaa loo yaqaan ee “guutooyinkiisii ​​Mongoliyaan” -Attila weli waa mid ka mid ah magacyada wiilasha ugu caansan ee Hungary- sida uu yahay Arfaad- sidaas daraaddeed iyagu waa,farsamo, Asian.
Sidaas daraaddeed xataa kala duwan / dhaqamada aad tahay ka badan waxaad u malaysay!
RyonFreeman • November 1, 2013 at 8:32 waxaan ahay • Reply
BrendaF • November 1, 2013 at 8:37 waxaan ahay • Reply
Taasi waxay ahayd mid laga cabsado! Her tartanka daacad ah xitaa kuma riix igu ilaa i arkay this post. Anigu waxaan ahay madow oo ninkaygiina waa bar madow iyo caddaan (inkastoo uu Isbaanish) oo i soo direen dad sheeganayo in i ma jecli nin madow heli kaftanka waqtiga oo dhan. Oh hana ha arkaan in carruurteyda. Bol! Mar walba waa ay ka qaadataan a double. Waxaan la guursaday 7 sano iyo waxa ay weli funny ilaa maantadan la joogo. Ilaahay ha barakeeyo aad nin qoyska!
TamaraC • November 1, 2013 at 8:41 waxaan ahay • Reply
Aamiin! Mahadsanid! Your maragga oo dhan u dhaco oo adduunka ah… Dadka u baahan tahay in. Ilaah ha idiin barakeeyo!!
Fariin ka Germany, Europe!
Keinya • November 1, 2013 at 8:44 waxaan ahay • Reply
Waxaan mahad this post aad u badan. Waxaan ahay in guurka ah interracial iyo sidoo iyo ninkayga iyo ayaan labada leeyihiin sheekooyin ku saabsan sida dadka nagu ogaataan oo aad dareento sida ay si fiican noo sheeg bartey bartaan waxa our xaaskaaga u eg ama la ii arkaa PIC ah carruurteyda (maxaa yeelay, waxay mari karin, isaga oo eegno oo keliya ilaa aad ogaatid ay qayb madow ka dibna idiin qabato muuqaalada yar qaarkood waa) oo markiiba waa arkaa waxay tahay ha waa in aan aabe madow iyo in ay ahayd oo rajadoodii. Sidoo kale, kids aan si fiican ku hadlin luqad kale si dhab ahaantii jahawareerinaya qof tan iyo magaca noo soo dhaafay waa Lawrence. Waxa jira sheeko ka dambeeya in aad waayo, isagu waa jinsiyad isku dhafan aad u (kaliya ma madow). Anyway, Waan jeclahay xaqiiqada ah in aad taabtay on this sababtoo ah qaar ka mid ah, waa sida heshiis weyn oo xitaa halgan sidii ay jiraan qaar ka mid ah saameynta jinsiyadda xoog iyo cadaadiska ee dunida (warbaahinta, dhallaankayagana jecel yahay xitaa, saaxiibo, iwm). Dareenkayga ku jira labada dhinac adiga iyo qaar kale oo badan, kuwaas oo u sheegay. Mahadsanid!
Keinya • November 1, 2013 at 8:48 waxaan ahay • Reply
By habka, Waan jeclahay song “Wax Good” ku saabsan xaaskiisa. Waa arrin u qurux badan oo ka dhigaysa i of my xiriirka u gaar ah. Mahadsan tihiin, waayo, music weyn aad! :)
Logan • November 1, 2013 at 9:17 waxaan ahay • Reply
waan jeclahay “robot”!!! Waxaan doonayaa inaan la cayaaray waxa ay u damaashaad ah.
Michael • November 1, 2013 at 9:37 waxaan ahay • Reply
“Sidaas daraaddeed iyadaan ku wifed.” Waxaan xaday in.
TylerDouglas • November 1, 2013 at 9:53 waxaan ahay • Reply
OH ON IMAN!!!!! Anigu waxaan ahay Caucasian, iyo xataa waxaan arkay dhacdo kasta oo Martin
Debbie • November 1, 2013 at 10:08 waxaan ahay • Reply
Aad ayaan ugu faraxsanahay in this akhriyey ahay oo arka in dadka kale la wadaagin isku dareen aan xagga guurka iyo “tartanka”, Ilaah ha barakeeyo!
Jason • November 1, 2013 at 10:35 waxaan ahay • Reply
1 Samuel 16:7…Ee ah Eebaha garsoorayaasha by qalbigiisa ku, sidaas sababta aan waxba? Waa in aan ka dhigi Rabbigu wuxuu leeyahay, ayaa sheegay in our caadiga ah, ma waxa jidhkeenna doonayo / innaba heerarka dunida this. Kiiskan, ka nin ee aragtida, heerka for naag waa Proverbs cutubka 31, ma midab maqaarka / ma heerka adduun ee u guursanayeen oo gudaha adiga kuu gaar ah “jinsiyadda / qowmiyadda.”
tabby • November 1, 2013 at 11:20 waxaan ahay • Reply
dude in aad baa looga cabsadaa!
Tony • November 1, 2013 at 11:31 waxaan ahay • Reply
Sidee baan waxan u mahad sababtoo ah African American waxaan ahay iyo xaaskeyga waa Hispanic. Her tartanka marna ahaa arrin ii, maxaa yeelay, qalbiga iyada Rabbiga. Waxaan hadda leeyihiin gabar ilmo. Marka aan eegno my xaaskiisa iyo gabadhiisa anigu ma arko qof dumar ah Hispanic aadan, ama ilmaha isku qasan. Kaliya waxaan arki labada barakooyinka ugu weyn ee noloshayda (Rabbi Ciise ka gooni). Mararka qaarkood xitaa waan iska illoobaa inaan nahay laba ah interracial iyo qoyska. Waxa aan dhab ahaan u fududahay markii sababtoo ah dadka kale oo dhan, laakiin anigu ma aan jeclaan lahaa hab kasta oo kale oo. Sayidka Rabbiga ahu wuxuu sii wadi laga yaabaa in adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo!
Trip, aad baad u mahadsan tahay for this. Waxaan ahay cad, iyo Cincinnati iyo meesha i soo koray waxaan inta badan ahaa kid kaliya caddaan on block ah. Xaaskeyga lahaa barbaarin gebi ahaanba kala duwan. kor bay u koray sidii Mexican ah ee miyiga Nebraska. Waxaan xitaa ma bilaabi karaan si ay u sharxaan qaar ka mid ah sheekooyinka igu odhan lahayd in iyada iyo walaalaheed lahaa in ay koraan maxaa yeelay, nacaybka, sumadaynta, iyo jahliga guri ka mid ah dadka ay ku soo koray oo la.
Waxay u guuray nagga si dhow ii. Waxay halkaas u guurtay fekerayo iyadu ma jeclaan lahaa inaad u dulqaadataan, maqashiin, ama ay la kulmaan wax ay iyada oo sii kordhaya wuxuu kor ugu baxay. Wow, waxaan ahaayeen labada naxay! waxyaalaha dadka dhihi lahaa noo suuqa, at park, ama kaliya oo ka mid in la cuno. Waxaad u malayn lahaa waxaan nahay on show ah, “Waxaad doonaysaa Do.” Waxay ahayd halgan, our jacaylkiisii ​​inoogu dhawray xoog, saaxiibadeena lahaa our dib, iyo Ilaaheenna ahu inoo wada xajin.
Waxaan hadda u soo guursatay for 11 sano waxay 4 carruurta u qurux badan si ay u muujiyaan waxa loogu talagalay. Waxa kale oo aanu hadda ku nool isla magaalada yar miyiga halkaas oo ay ku soo koray. nacaybka waa ka yar, laakiin looks weli waxaa jira. Waxa aan mar walba dhihi / sameeyo markasta oo aanu la kulmaan kuwaas oo “weerar” waxaan kor kuwa “weerarka” ina soo Salaadda. The wadahadalo Bible ah oo ku saabsan cadowga u jeclaataa sida naftaada, oo in kastoo aanan ka fiirsan dadkan in ay cadaawayaashayda, fikradda ah, Qorniinku wuxuu weli waa isku mid.
Jacaylka, waxaan kaliya u baahan si ay u muujiyaan qof kasta jacayl. No macno ah tartanka ama asalka qofka, Ilaah baa iyagii ka jecel yahay, Oo innaguna waxaynu nahay inuu noqdo sida Masiix, sidaas darteed waxaan waa in aad u jeclahay.
Casaaseel • November 1, 2013 at 1:58 pm • Reply
Trip article Wonderful marnay. Sida i weli ahay hal laakiin tan i ay ahayd wax yar i xiiseynayay u guursanayeen oo qof dumar ah oo cad, sababtoo ah laba ka mid ah adeeraday guursaday haweenka cad. Marka i helay badbaadiyey i ma aanan arkin wax farqi ah oo u dhexeeya madow ama caddaan, laakiin ilaa iyo inta aan la barbarta Faith isla.
Trip post Wonderful. Waxaan la dhibtoonaya badan dhawaan su'aalo shukaansi sida kuwa aan taariikhda waa in, iyo marka, iyo sababta, iyo sida loo sugi on Ilaah xagga alaabtayda oo dhan in dhawaan, iyo this post ahaa mid aad u xeeldheer. Thanks for sharing.
post Wonderful! Trip, aad leedahay qoys ah oo qurux badan, oo waan kugu mahad naqayaa, waayo, oo aad qalbigiinna oo la wadaago. In kasta oo aan ninkeeda oo aan labaduba waa cad, oo waxaannu ku koray aad u kala duwan. Isagu waa wiilka dalka iyo is-naadiyey redneck run ah. had iyo jeer waxaan dareemay dheeraad ah oo raaxo leh ku wareegsan dadka madow, xataa sida ilmo yar oo. Waxaan marna ka soo horjeeda in ay guursadaan nin caddaan, laakiin aan la door ah ayaa si xaqiiqo ah ku wajahan dadka dhaqanka hip-hop ah. Dadku waxay inta badan na weydiiso sida aan u soo wada dhamaaday, oo dadka intooda badan way argagaxaan, si aad u ogaato ninkaygiina waa cad. Isagu ma aha waxa aan ka filanayay ilaa naftayda sii kordhaya, laakiin waa wax walba oo aan loo baahan yahay in nin iyo aabbahood caruurta. Rabbigu wuxuu si dhab ah ii barakeeyey, iyo noloshayda anigu ma qiyaasi kartaa hab kasta oo kale oo!
Xusuuso: List The | Kit Xiriirka Resource
No dheer qalbigaaga ama doorashada laakiin waxa Ilaah ayaa la qorsheeyey / umad kaliya. Waxaa la yaab leh sida siiya Ilaah ayaa shaaca ka qaaday. Waxaan ahay hooyo American kuwaas oo ku soo koray xero oo ninkaygiina waa Mexico. kor Waxaan ku koray dalalka kala duwan weli aan Ilaah rumaysanna ahu wuxuu isla doonana halkaas oo uu doonayay na inay isaga u adeegaan iyo sameeyey rizqiga na in ay la kulmaan. Waxaan hadda ku nool meel u dhow Boos ee gobolka gurigeyga. waxaan ka baryay (sida Christian cusub ee da'da 8) in Ilaah i isticmaali lahayd ee kaniisadda guriga iyo waxaan jeclaan lahaa in aan marnaba ogaan in Ilaah i koraan lahaa naag Pastor ee this yiri kaniisadda! Weli, Waxaan ahay mid la barakeeyey in la ogaado in this isku Ilaah oo xoog badan oo dunida abuuray sidoo kale na isticmaali kartaa si aad u tusto jacaylkiisa kale oo waa weyn oo nimcadiisa. Si yimaado kooxda ninkayga oo ay la socdaan sida uu gargaare injiilka wadaagaan dadka aniga ii gaar ah.
Tani waxa ay ahayd dhiirri gelin wayn ii. Oo wax weyn inaan maqlo sida Eebe qalbi bedeli kartaa inuu doonistii Ilaah sameeyo! Continue si uu shuqulka samayn!
Waad ku mahadsan tahay gabayada iyo runta aad ku daraan. Our qoyska jecel yahay aad music. Gaar ahaan wiil aan.
Ninkeyga waa Mexico, oo waxaan ahay Filibiin. waan ogahay 3 luqadaha iyo waxbarashada wax yar ka badan. My saaxiib fiican waa madow oo ninkeeduna waa Carabta. Waxaa la yaab leh si ay u arkaan isku dar ah ee jinsiyadaha ee kaniisadaha iyo xataa kooxaha.
Xaqiiqdii Waxaan kaliya fiiri waxa ku jira hal qof. Waa nidaamsan si ay u bartaan luqadaha oo arag oo dhan oo ka mid ah dhaqamada qurux badan. In Masiix jirto Yuhuudi ma, Greek, Lab ama dhaddig.
Mid ka mid ah aan ka badan ceeb “doorbidida” dib u ahaa aniga iyo xaaskeyga in ay taageere Denver Broncos a.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, Ilaah ogol yahay ii si ay u koraan in maturity ka hor inta uu bixiyey Iyadoo ii.
Waxaan ahay cad, Waxaan ka helay uur leedahay, sanadka koowaad ee dugsiga caafimaad ilmo Mans madow. At saddex bilood oo uur leh, Ilaah ii soo diray saaxiib – Nin Hindi ah brown. Waxaan labada kaliya laga bilaabo our shaqooyinka dugsiga caafimaadka. Waa maxay waxaan ku dhowaa inaan samayn jiray waalan ku filan. Markii uu u sheegay waalidkiis aniga igu saabsan ay ku hanjabeen in ay ka baxaan taageerada dhan, walaalihiis oo diiday in ay ila hadlayn. sanad iyo bar ah ka dib markii aan guursaday waxaan weli ku jira dugsiga, kor wiilkayagii oo weli dadka wareersan. Ilaah waa sidaas wanaagsan, at mid ka mid ah waqtiyada ugu adag ee aan nolosheyda, wuxuu i siiyey saaxiib, nin cibaado leh, inay i jecel, oo dhan iga, i + ilmaha. Xeres nin dhabta ah. Xeres Aabbaha aad u jecel iyo roonaan badan.
Tani waa munaafiqiinta laakiin marka aan arko labo ah interracial in dadweynaha aan waxba ka qabaa marka laga reebo marka aan arko nin Black leh gabar aan Black. Waxaan xitaa ma ku caasiyeyn haddii qeybsanaan ku xigeenka ay laakiin waxaan ognahay in nin Black bulshada tani waa mid dhib badan ugu. Waxaan si ay uga shaqeeyaan hotel a garab nin Black loo isticmaalo iyo halka martida ii loola dhaqmo si ixtiraam leh oo rumaystay aan shaqo leh heer sare ah u qaban karo, waxay Wajigooda biiray la co-workers Black aan xaq oo i hor. Waxaan in ay qolka ay samatabbixin karaan shukumaan laakiin guests ma uu doonaynin inuu albaabka u furi iyaga u. Waxaan eegi kartaa guests in si sahlan laakiin waxa la weydiiyey “Anigu garan maayo. aad this xamili karo?” Waxaan ka baxsan istaagi karin on fasax aan dhibaato laakiin waxa ay booliisku u awdeen si aad u weydiiso “Maxay yihiin hadalladan aad guys samaynaya?” Dadka xukumo oo lagu daweeyo dadka oo Black duwan anigoo aan is tusay sababta. Sidaas marka aan arko nin Black cid kale, fikirkaygana koowaad waa “waxaa uu isku dayayaa si ay nolol sahlan isaga qudhiisa on.” Fikirkaygana labaad waa “Waxa uu doonayaa kids uu u leedahay in muuqaalada iyada.” laakiin hey, kuwaas ahay inaan xukumo? (Inkasta oo aan samayn) u badan tahay in aan guursan doono meel ka baxsan aan tartanka sababtoo ah Taan jeclahayay ee u quudhin sidaas oo kale waxaan is-idhi in bilowgii, markan waa uun toos ah munaafiqiinta. Ugu yaraan aad idinkaa guursaday sababahan xaq u.
Waxaan bogaadinayaa Trip & Jessica Lee. Midaynta kaniisad ah oo runta ah ee Ciise Masiix iyo guurka "interracial" kaniisadda dhexdeeda waa jawaabta cunsuriyada ee dhaqankeena. Waxaa jira hal tartan oo kaliya, tartanka aadanaha, "Lab iyo dhaddig ayuu abuuray ..." (Genesis 5:2a), iyo meel Qorniinku odhan in ay guursadaan kuwa aad midab maqaarka isku mid ah ama qaab isha.
Thanks for maqaalka! Sida qof dumar ah oo hal madow Kii Ilaah jecel, Oo wuxuu doondoonaa inuu nafta iga qaado si farxiyo iyo waxa ay ka tarjumaysaa jacaylkii uu dadka kale ku nool yihiin, Waxaan ku tukaday adag oo ku saabsan mawduucan. Raggan ayaa hal kiniisadaha aan ka qayb galay ayaa inta badan ahaa rag non-madow. Mararka waxaana dareemayaa sida inaan ahay hoose ee pole totem ah, tartan dhanka ah caddaan ah, Haweenka Asian iyo Hispanic la dheer, iyo Wabiyadan socota timaha iyo qaababka aan marnaba yeelan doonaan. Xitaa raadinta iyada oo qaar ka mid ah goobaha shukaansi Christian, Waxaan ogaaday in boqolkiiba badan oo ah rag la profiles adag ayaa tilmaamaya inay yihiin xiiso badan oo dhan marka laga reebo qowmiyado African-American.
Your article ahaa yididiilo aniga iyo garto on. Ilaah baan isku hallayn doonaa si ay u siiyaan dhammaan meelaha nolosheyda, ay ka mid yihiin xiriirka aan. Thanks!
Waad ku mahadsan tahay in aad daacadnimo!
ayeeyo • November 1, 2013 at 10:31 pm • Reply
Dad badan oo, sanado badan ka hor markii wiilkayga ugu da'da weyn waxay ahayd abbaaraha 2, waxaan gaari ku dhex qaybta madow ee magaalada oo uu uga hadashay in dadka oo dhan ayaa madow iyo waydiiyay sababta uu ahaa qof walba madow. Waxaan isku dayay in aan u sharaxno in waqti dheer ka hor dadka ka fikiray, waxa ka fiican ahaa haddii dadka cad oo dhan ku noolaa hal meel oo dadka madow oo dhan ku noolaa hal meel ah. Waxaan intaas ku daray in hadda waxaynu og nahay waxa aanu wax faraq ah midabka maqaarka waa. Out of afka ilmaha yaryar……ayuu yidhi, “Haa, waxa ugu muhiimsan waa in aan helay maqaarka!”
Jays_Page • November 2, 2013 at 12:56 waxaan ahay • Reply
walaalkiis Wax wanaagsan baad tidhi.
maqli ndekai • November 2, 2013 at 3:32 waxaan ahay • Reply
gursaday naag Ilaah ka cabsada abid ugu fiican ee aad samayn karto waa in aad yeelatid qoys faraxsan. sidoo kale sheegay in safarka waxa aad rabto in haweenka ah waa ka fog ka muhiimsan waxa ay u eg.
Xusuuso: Saturday qaylo dheceen: SBTS, Goynta Waxaa Toosan, & Links Wasaaradda | H.B. Charles Jr..
Waxaan jeclahay in aad ahaayeen si furan oo daacad ah ula this post. Waxaan dareemayaa sida falka guurka interracial iyo shukaansiga waa dad topic baahna in ka badan u furan si ay uga hadlaan sababtoo ah in qarni kastaa Waxaan dareemayaa sidii dadka ka daadanayo la. From aragtideyda Waxaan qabaa inay u qurux badan in la arko sida jacaylka ma sameeyo takoor.
Laakiin sidoo kale waxaan u malaynayaa in furfurnaan aan xaggeeda waa sababta oo ah waxaan mar walba ku koray bulsho halkaas oo waxa aan ahaa mid ka mid kaliya tartanka iyo waalidiinta aan marnaba iga kiciyey si ay u naceen qof sababtoo ah maqaarka. Laakiin, Aan ku sameeyey kulmaan debcin qaar ka mid ah aan sanad yar marka waxaan soo qaatay saaxiib fiican, kuwaas oo ahaa white, si prom waayo Ayayday aabbe ma aha jeclaan of dadka cad. Si kastaba ha ahaatee, iyada reaction wax ka beddeli mayso maskaxdayda ku saabsan cidda aan waa in ama aan waa taariikhda.
Weligay lahaa doorashada ah oo ku saabsan waxa ay tartan waxaan ku taariikhaysan. Laakiin, markii qoyskeyga ogaaday waxaan lahaa saaxiib oo wuxuu ahaa madow, waxay ahaayeen yaabay. Waxay ahaayeen yaabay, waayo qoyska aan degdeg ah ayaa ku nool meel u badan cad ee la soo dhaafay ka 10 sano oo iyana waxay u maleeyeen in xiriirka aan idinla dhaqdhaqaaqdo.
Tani waxa ay ahayd post a aad yididiilo leh. Xaaskeyga waa madow / El Salvadorean. .. oo anna waxaan ahay nin Korean…. Waxaa gabi ahaanba waa joogta ka ah dhaqanka Korean in ay guursadaan ka baxsan tartanka Korean daa naag madow / Latina. Sida laba kisi ah interracial aannu wajahay Dhibaato badan, laakiin waxa kaliya oo mattered Masiixa oo bond aan Masiixa ku dhex Sokeeye saaxibo iyo hadda ku jira guurka.
Waxaan run ahaantii marnaba post on wax sidan oo kale laakiin this post hadlay aniga iyo xaqiijin aan niyadda ku sameynayo sida aan dadka kale golaha ku jira dabagalka helo xaaska in ay qowmiyadda.
Waxaan qabaa tani waa sheeko la yaab leh. Waan jeclahay sida hufan aad tahay sababtoo ah dad badan oo naga mid ah isku day in aad ku dhuumato waxyaabaha sida doonaya doorbidida, laakiin waxaan jecelahay sida aad u sheegay in aanu u leeyihiin in ay iyaga soo gudbiyaan. Waxaan ilaahay ka baryaynaa in sii wadaan in ay i tuso waxyaalaha sidan oo kale, waayo, sida runta ah waxaan aaminsan yihiin in waxa ay igu caawin doontaa in ay sii qalbigayga iyo indhaha on Ilaah iyo Kalimadiisii ​​iyo ma ahan oo keliya muuqaalka kore ee haweenka igu wareegsanu.
Xaaskeyga marnaba u maleeyey inay guursadaan lahaa Yankee ah, Hispanic, Yuhuudda Christian. Waan ku faraxsanahay ayay yeelaysay. :)
hugaaminaya! aad badan lagu wadaago sheekada jacaylka aad. Dhalinyarada, ardayda kulliyad iyo dhalinyarada waaweyn waa u baahan tusaalooyin sida! Waan ogahay sababtoo ah waxaan la haysta qarax hadalka ku saabsan galmada, shukaansiga iyo xiriirka iyaga la tan 2003. Doonaa si xaqiiqo ah la wadaagtaan iyaga at https://www.facebook.com/FMUniversity.
Ilaah ha barakeeyo, Trip!
Waxaan ahay nin caddaan ah naag madow leh. Waxaan weli ku jira sanadkii hore, laakiin wax qoomama ah qabin! Waxaan leenahay ilmaha feedh ku saabsan jidka oo aan jeclahay, ehelkayagii yar. Trip Like Lee, Waxaan sawirka naftayda u guursanayeen oo qof dumar ah oo aan tartanka u gaar ah (Waxaan qabaa in ay kaliya dabiiciga ah). Laakiin waxaan marnaba mar ama fikirka waxaa ka mid ah su'aalo u noqon “xaq u” ama “qalad ah.” Iyadu waa Ilaah. Taas macneheedu tartanka kaliya in aan eegno!!
NTOBEKO • November 7, 2013 at 2:01 waxaan ahay • Reply
Aamiin TOD, Fadliga kala duwan iyo nabad inay Ilaah ammaanaan.
uf • November 7, 2013 at 8:51 pm • Reply
Waxaad iyada wifed? uf, ma kari kartaan inaad sheegay guursaday?
Waxaan xusuustaa markii ugu horeysay adiga iyo Jessica bilowday xiriirkooda! Waxaan weli lagu dhiirigelinayaa in ay arkaan in aad laba sii on nimcada Ilaah ee. Tani waxa ay ahayd blog weyn, waxaan qabaa waxaa laga yaabaa in la xorayn, waayo, dad badan sidii ay doortaan in ay eegaan qalbiga qofka halkii ay dibadda ka.
Xusuuso: Reading Sahlan: 11/01/2013 – 11/12/2013 |
“adag oo si dhakhso ah u ordaan dhinaca badbaadiye iyo haddii aad aragto qof, ee geeska of ishaada ordaya oo isku jiho ah, waa in aad eegno labaad”
Absolutely this jecel! Waxaan la waalidiinta aan la wadaago. Waalidkey leeyihiin arrimaha la xaqiiqada ah in aan ka heli naftayda xiiso u guys of tartan oo kala duwan. Inkasta oo aanan anigu had iyo jeer lagu xiiseynaya ee guys ugu cibaado, waxaa jiray jeer markii uu xiiseynayo in nin xad cibaado aan, laakiin maxaa yeelay, isagu ma uu ahaa cad waalidiinta aan gebi ahaanba meesha ka saaray oo ka reebnay nooc kasta oo xiriir iyaga la. Waxaan ahay hubaal iyaga la wadaago, waxaana rajeynayaa this indhahooda furtid doonaa.
Brother, erayo kale oo xiriir interracial waa in laga soo vocabs our. Waxaa tartanka aadanaha mid ka mid kaliya.
Marna ha arkeen jidkaas. Waxaan cunsuriyad ma ihi, laakiin in aan soo korayay, waxaa jiray fikradda ah waxay ina bartay in dhaqankeena in maldahan in gabdhaha cad oo kaliya aad u jecel iyo qoyskaaga neceb. Waxay jecel yihiin inay la xiray. Sidaas ayeeyooyinka aan had iyo jeer ayuu yiri “haddii aad naga dooneyso in aan kuugu yimaado arooska ama aan si aad bixiso booqashada ee gurigaaga, guursadaan gabar caddaan. noo yeelay, iyadu ma ogolaan doono in la helo kuu dhow.”
Anigu waxaan oggolahay inaan ku turaanturoon marnay
Waxaan qabaa in haddii aad iyada jeclahay iyo ilaah ka raalli noqdo, waxaan idinku leeyahay sababta aan
Waxaan qabaa waxaa la ilaahyo qorsheeyo si aad u la kulmi Jessica !
Btw waan jeclahay safarkaaga music marnay
Xusuuso: blog Casserole – 12/13/2013 :: Carey Green - soo saare podcast, qoraaga, Gudoomiyaha, ganacsadaha, guurka & Tababaraha qoyska, iyo raacsane dareen Masiixa.
Waa funny. Waxaan ahay cad (qayb Hispanic, laakiin ninna garan lahaa by ii doondoonayseen at), oo ninkaygiina waa cad, laakiin waxa uu ka dalka oo anna magaalada waan ka ahay. Waxa uu xagga koonfureedba, oo waxaan xagga woqooyi ka ahay. Waxaan isku mid ma aha oo kaliya sababtoo ah codadka maqaarka our la mid yihiin. Waxaan ku socdaan iyo hadal iyo habka wax ugu socdeen kala duwan, iyo qoysaska waa dhab ahaantii kala duwan, laakiin waxaan is jeclaataan, oo Ilaah na soo wada keenay. Dhaqan, in kastoo, waxa ay qaadataa qabsado labada naga mid ah. Taasi, oo ay la socdaan in ay si siman weheliyaan, si ay ugu adeegaan Rabbiga, Waa maxay guurka waa dhan oo ku saabsan! Ku faraxsanahay in aad kor u hadlay!
Teboho Sekhosana • January 13, 2014 at 5:47 waxaan ahay • Reply
Our Ilaah Awesome na abuuray araggiisa,sidaa darteed midab ma idinku thing.Love ah walaalkay
Taasi waa sheekada ugu quruxda badan………gaar ahaan naagtaada…aad guys waa barakaysan yihiin. …AAMIIN in ur story! !!!
mahad ilaa hadlaya
Trip! Ugu horeyn, aad music waa u qurux badan oo dhiirigalin leh baqeen. Waan jeclahay fariinta aad wacdiyo kasta oo song kasta. Continue tayo yaabka ahu uu idin siiyey! xiriirka Interracial iyo guurka waa gabi ahaanba qurux badan. Waa in aan macno ah waxa tartanka ka mid ah waa, laakiin sida aad ku tidhi, xaaska sida Ilaah doonayo. Anigu waxaan ahay Caucasian, laakiin lagu soo jiidatay dadka oo African American noloshayda oo dhan. My qoyska aad u waa, aad, aad u aqbalin of this. :) Si kastaba ha ahaatee, Waxaan ilaahay ka baryaynaa in uu ii soo diro mid ka mid ah xaq u, kuwaas oo uu leeyahay marwooyin iyo tayada godlike. Waxaan u ooman yihiin nin ayaa sheegay in ay Masiixa ku jeclahay in ka badan waxay i jecel, ixtiraam leh, iyo macaan. Tani ayaa indhaha ii furay in kastoo in ay u furan yihiin dhammaan jinsiyadaha halkii kaliya madow. Ilaah ammaan adiga iyo Jessica!
Terrice • January 29, 2014 at 11:39 waxaan ahay • Reply
Tani waxa ay ahayd article weyn… i runtii ku raaxaysan reading aad blog. Thanks for wadaagaya sheekooyinkooda iyo isagoo si hufan. Sayidku waa inaad la isticmaalayo siyaabo badan oo cajiib ah! Ilaah ha barakeeyo!
ski • January 29, 2014 at 9:55 pm • Reply
Wow, article tani waa mid laga cabsado! Ilaah ha ku ammaanmo! Trip, waxaad tahay qoraa fiican ah iyo sidoo. Waxaan dareemayay inaan ka akhriyeyey waa sheeko hindiga ama wax halka reading aad post. Badan oo dhoola iyo “awwwwww!” LOL Thanks for isagoo saamayn cibaado leh dhinacyo badan oo.
LeisleyAbrahams • January 30, 2014 at 2:41 waxaan ahay • Reply
Trip Thanks in sida ugu wanaagsan ee waxa la ii sharxay abid!!My gabadha iyo saaxiib aan waxaa tukanayay oo sugaya on Rabbiga, waayo, step.I'm soo socda su'aalo ka buuxa timo Afrika iyo She ee white..I'm madow had iyo helitaanka sababta i iyada jeclaan oo aan gabdhaha aan maqaarka laakiin dhammaan i arki iyada waa qof dumar ah oo cibaado leh on dab, waayo, Ciise, Ciise wuu jecelyahay in ka badan ayay weligiisba wuu i jeclaan doonaa iyo in wax aan u baahanahay in aan life..You daacad ah igu waxyoonay #wiseWordsTrip #NoWonderYouMyFavRapper
Xusuuso: Morning Mashup 01/31 | Theology Matters
Aprilci • March 3, 2014 at 8:41 pm • Reply
runtii ku faraxsanahay in aad waqtiga ka qaaday in this qori Waxaan ahay. post Tani waa nooca random, marnaba run ahaantii ka fikiray, waxa ku saabsan (danbayntii, Waxaan xitaa marna ogaa this page jirey ilaa maanta). Si kastaba ha ahaatee, Waan ku faraxsanahay inaad ku qoray…Waxaan qabaa in qayb ka mid ah in inta badan dhalisay sida aan u xiiseynaayo ahayd arrinta doorashada oo dhan. Waxaan guursaday nin 5 sano (waxaan leenahay 3 carruurta wada) kuwaas ma doonayaan in ay guursato mar dambe sababtoo ah erayada uu—Waxaan aan ahaa inuu doorashada (oo marar badan wuxuu isticmaali lahaa jalaato shukulaatada ah / vanilj eegtahay jalaato si la isugu dayo in uu hal dhibic–uu doorashada ay ahayd qof dumar ah oo la a um….”nice” jirka–Waxaan u tegi doonaa si). Waxa ugu waalan yahay dhab ahaan, isagu wuxuu sameeyaa raabka Christian—(????). Anyway, Waan ku faraxsanahay in ay arkaan in aad u tegey oo ku saabsan sida saxda ah—gelinaya hawadooda Ilaah kor ku xusan aad damacyada jidhka…..Anyway, sii wadi inay naag kuu jeclaada sida Masiix jecelyahay Kaniisadda….Waxaan idinku oo dhan sii doonaa baryadayda…..
Sida caadiga ah aan akhriyin article on blogs aadan, laakiin waxaan jeclaan lahaa in la yidhaahdo in qortaa-up this aad igu qasbay in ay eegno oo saas yeel! style Your qoraal ayaa la ii yaabeen. Mahadsanid, post aad u fiican.
OTHER • August 31, 2014 at 1:45 pm • Reply
Haaa. sabab la mid ah i guursaday gabar caddaan. Waad ku mahadsan tahay la wadaago. akhrin wanaagsan. dhaafa saaray. Ilaah Adiga iyo Walaalkaa qoyska barakeeyo. Rabbigu wuxuu Sayidkayga ku ammaana, tho foreal.
Well, Waxaan qabaa dadka badan yihiin naxay by xaqiiqada ah in ragga MADOW WANAAGSAN yar yihiin dumarka xaaskiisa-nayaa White oo ma na dumarka MADOW BADAN. Waa wax laga xumaado in comments jinsiyadda jira, laakiin waxa kaliya sida dadku dareemaan, in si gaar ah, haweenka- in ay yihiin Black. Waxaan leeyahay heerarka double saaxiibkay waa Latino & Waxaan ahay Black iyo in ay okay (loogu tala galay dumarka Black taariikhda ka baxsan ee ay tartanka). Dhinaca kale, marka aan arko hufan a (kuwaas oo aad u yar) nin Black la White naag / Other, Waxaan ku noqdo sidii DANG mid kale oo ka mid ah walaalaha tagtay…hadda in uu kaliya la hadlaya oo ka midab wadnaha ama ma. waa waxa ay tahay.
Xusuuso: A Xaas Man | Headline
Jeff • December 4, 2014 at 10:05 waxaan ahay • Reply
Hey Trip, mahad jawaab fiican oo maskax leh in su'aal adag. aad Like waxaan ahaa ma ku raad naag kasta oo markii aan la kulmay Michelle. Waxay ahayd la heli karo iyo waxaan ahaa la heli karo iyo waxaannu aragnay dunida jidadka isku. Our tartanka MA waa waxa ugu kala duwan nagu saabsan oo Rumaysad noo WAA wixii Nooga keeno midnimada. Waxa kaliya ee aan ku taariikhaysan iyo guursaday a dumarka madow oo aan waayo waajib guursaday more (ilmahaaga) iyo filasho dhaqan badan danaha labada dhinac. Tan iyo markii aan xiriir la lahayn Ilaah uga leexan booqasho kaniisad marmar waxaan aaminsanahay waan bukay diyaar guur. Iyadoo midabka maqaarka jiray annana waannu lahaa qiimaha aad u kala duwan oo ka dib waxaan kala furay Ilaah yimid qalbigaygu jebiyo inay i bogsiinayo. Waxaan ahay si shukriya geesinimada xaaskeyga in ay eegaan aan iman kara iyo ma aha ee la soo dhaafay oo i jecel shisheeya midabka maqaarka. carruurta iyo wasaaradda kaniisad our fikiri doonaa jacaylka Ilaah dadka ka soo socod kasta oo nolosha. Ujeedadu waxay tahay Boqortooyada sida goolkii barbaraha weyn dunida ee iyo in Ciise yahay Rabbiga oo dhan.
Jeff • December 4, 2014 at 10:39 waxaan ahay • Reply
Hey Trip, mahad jawaab fiican oo maskax leh in mawduuc adag. aad Like waxaan ahaa ma ku raad naag kasta oo markii aan la kulmay Michelle. Waxay ahayd la heli karo iyo waxaan ahaa la heli karo iyo waxaannu aragnay dunida jidadka isku. Our tartanka MA waa waxa ugu kala duwan nagu saabsan oo Rumaysad noo WAA wixii Nooga keeno midnimada. In la soo dhaafay aan ku taariikhaysan iyo guursaday a dumarka madow ka mid ah waajibaadka (ilmahaaga) iyo filasho dhaqanka (qoyska) badan Jacayl dhexdiinna ah. Tan iyo markii aan xiriir la lahayn Ilaah ka baxsan imaanshaha kiniisadda, Waxaan la xanuunsan darbay guurka. Iyadoo midabka maqaarka jiray annana waannu lahaa qiimaha aad u kala duwan oo ka dib waxaan kala furay Ilaah yimid qalbigaygu jebiyo inay i bogsiinayo.
Waxaan ahay si shukriya geesinimada xaaskeyga in ay eegaan aan iman kara iyo ma aha ee la soo dhaafay oo i jecel shisheeya midabka maqaarka. carruurta iyo wasaaradda kaniisad our fikiri doonaa jacaylka Ilaah dadka ka soo socod kasta oo nolosha iyo baahida loo baahan nimcadiisa. Kingdom waa barbaraha weyn dunida ee iyo in Ciise yahay Rabbiga quruumaha oo dhan. Waxaan baryayaa ee qoyskaaga iyo fadlan noo baridaa aad.
Kennedy • December 18, 2014 at 2:13 waxaan ahay • Reply
Waxaan ku biiray safar aan marnaba qabaa inaan for lieying islamarkaana dhacayay dadka lay iska indha-tiray qaar ka mid ah sms ka kooban emails ka heli kartaa qof sida goobta qaar ka mid ah mar walba, laakiin u ma baxsan karo qorshaha Ilaah sidaasuu u ahaa sida xiiso leh iga ah aan akhriyey dib isagoo aan siyaasadda wax si halkaas oo kan i jecel, laakiin qowmiyadaha ma aha oo kaliya ka dibna waxaan ka helay gabadha cad American kuwaas oo aan daryeel ku saabsan tartanka,dhaqanka oo keliya qofka jacaylka & daryeeli iyada ku saabsan “yaa iiga waa” isagoo Ilaah la jira oo dhan waxaa suurto gal ah iyadu waa runtii dooqa.
Kennedy • December 18, 2014 at 2:19 waxaan ahay • Reply
Waxaan ku biiray safar aan marnaba u malaynayaa in aan ka heli kartaa qof daacad ah sida goobta qaar ka mid ah mar walba, waayo Marba islamarkaana dhacayay dadka lay iska dhego-sms qaar ka mid ah ay ku jiraan emails in aad la xiriirto iyaga, laakiin u ma baxsan karo qorshaha Ilaah oo intaasu waxay ahayd sida xiiso leh aniga iyo aan akhriyey tahay madow aan siyaasadda wax halkaas oo kan i jecel, laakiin ma aha oo kaliya aan qowmiyadaha ka dibna waxaan ka helay gabadha cad American kuwaas oo aan daryeel ku saabsan tartanka,dhaqanka iwm… qofka keliya qofka xaq u & daryeeli iyada ku saabsan “yaa iiga waa” isagoo Ilaah la jira oo dhan waxaa suurto gal ah iyadu waa runtii dooqa.
Ryan • December 27, 2014 at 1:43 waxaan ahay • Reply
Waxaan shukaansi gabadh kuwaas oo jecel guys madow… oo waxaan ahay cad. Waxay ii xaqiijinaya in ay i jecel badan, laakiin weli amni weyn ii. Waxaan rajeynayaa in maalin maalmaha ka mid guursado gabar this. Ma jiraan wax si ay u qoran si wanaagsan on arrintan ama nooc kasta oo ka mid ah talo?
Haa Trip! Ee waxaan ahay naag hal madow iyo jaamacad u badan oo cad oo noocan ah ee wada hadalka had iyo jeer yimaado ilaa id aan goobada of saaxiib madow. Inkasta oo aan haysto rabitaanadayda nin madow (Waxaan ahay oo dhan, waayo, jacaylka madow), Waxaan mar walba u furan yahay shukaansi ka baxsan aan qowmiyadda ahay, maxaa yeelay, aad marna waa ku garanayaa kii Ilaah isticmaali karto si aad u kala duwan ee nolosha. Waxaan arkaa dadka kuwaas oo ay ku salaysan yihiin ay shakhsiyadda, qof, qiyamkooda, iyo waxay aaminsan yihiin in ka badan wax aan qaadan si ay u ogaadaan. Looks ha macno ah oo ay jiraan xaalado gaar ah bulshada in loo fahmay waxa laga yaabaa haddii kale ay la taaban karo ayaa la sara kiciyey dhaqan kala duwan qowmiyadaha, laakiin arrimo kuwanu ma dealbreakers. Haddii wax, waxay ka dhigi doonaa xiriir dheeraad ah oo xiiso leh. Your sheekada waa sida sheeko qurux badan jacaylka in aan aad u rajaynayaa in ay maalin uun la kulmaan. All oo dhan, ma kaa caawin kara kuwaas oo aad jacayl la, iyadoo aan loo eegin haddii ay madow, white, jaalaha ah, Barney guduud, ama Ninja Diiinow cagaaran. Jacaylku waa universal iyo ka sarraysa oo dhan qowmiyado. Waxaan sida Masiixiyiintu waa inay si dhan xataa jeclaataa kala. Mararka qaarkood ay isku naf, ciyaarta runta ah, lammaane nolosha, iyo saaxiib fiican waa qof si buuxda u soo horjeeda ee qofka aad abid malayn naftaada la. Waxa ay iga qosol siisaa inay maqlaan laabtaada in sida aad la soo qaadey si Jessica waayo, kuwa is-hoosaysiiya, naxariiseed, iyo naagtii Eebe ka dhawrsada in ay ahaa oo weli waa. Your ururka waxa ay markhaati run in rumaysadkiinna aad la wadaago in Ilaah ka sarraysa oo dhan kala duwan. Noqo mid la barakeeyey.
Mark • February 22, 2015 at 3:17 waxaan ahay • Reply
Hey, Waxaan aad dareento. Waxaan leeyahay dhaxal Aboriginal Australia oo mar walba waxaan doonayay in ay guursadaan Koori kale (Aboriginal) laakiin sababta oo ah diimaha dhaqanka iyo isirka, way ka dhigay mid aad u adag. Waan ku soo dhamaaday u guursanayeen oo madaxa Anglo Red a. Laakiin Waxay jecel yahay Ciise iyo in waxa muhiim.
Waxaa barakaysan tahay inaad ogaato ma ihi on track qaldan sida aan ka heli dhow yahay waqtiga waxaan ka dhigi doonaa doorasho ku saabsan lammaane nolosha!
jamel • July 12, 2015 at 9:17 waxaan ahay • Reply
Ilaahay ha barakeeyo waxa adiga iyo qoyskaaga in Ciise magaca macno ah waxa kor u tahay arrimaha ku saabsan sida ay kuula dhaqmaan aan iyo aad tahay wadaad ugu fiicnaa ee dhabta ah
Cesraa • November 6, 2015 at 3:17 pm • Reply
"Oo markii qorraxdu sii dhacaysay sii dhaadhacayeen, hurdo aad u weynu Aabraam ku soo dhacday; iyo, waxaa, cabsi gudcur weyn leh baa ku dhacay. Markaasuu wuxuu ku yidhi Aabraam, Ogow in hubaal farcankaagu ay dad qalaad ku ahaan jirtay dalka a noqon doontaa in aan kooda ahayn, oo ay u adeegi doonaan; oo ay afar boqol oo sannadood la dhibi doonaa; Oo weliba quruuntaas ay u, ay u adeegi doonaan, Ayaan xukumi doonaa: oo dabadeedna way ka soo bixi doonaan iyagoo xoolo badan wata. "
Sida laga soo xigtay Song of Solomon 1:4-6:
"Anigu waan madoobahay, laakiinse waan u qurxoonahay, Gabdhaha reer Yeruusaalemow,, Sida teendhooyinkii reer Qedaar, sida daahyadii Sulaymaan. Ha fiirin i dul jooga, maxaa yeelay, waxaan ahay madow, maxaa yeelay, qorraxdu wuxuu i eegay: carruurta aan hooyaday ayaa ii cadhooday; Oo waxay iga dhigeen ilaaliyihii beeraha canabka ah; Laakiinse beertayda canabka ah ma aan dhawrayn. "
Taa waxaa ka duwan Numbers 12:10-15 dhigayaa in Mariam lagu habaaray by Ilaah markay disrespects uu nebigii, sidaas Mariam laga xayuubiyey iyada cado ama midabka noqdo caddaa sida baraf cad. sarbeeb ee element this waa in dadka Masiixiyiinta ah ayaa lagu dilay dhaqamada oo dhan iyo Caucasians sheegan inay yihiin doortay dadka, marka bible waa buug Cibraaniga ah oo ku saabsan Ilaah oo Masriyad ah, kuwaas oo ku qeexan yihiin in Israa'iil / Yacquub u dhashay 12 iyo wiilashiisii ​​iyo soo saaray qabiilka reer binu Israa'iil oo madow, sida dhamaan xubnaha iyo Soddognimo, Quduuska ah.
Waan ogahay qofka aan ahay. Oo waxaan ma soo horjeeda dadka Nubian shukaansi / guursadaan dadka cad. Waxaan marnaba samayn lahaa, laakiin waxa kaliya kor u dadajiyaa hanaanka, isagoo saas nabad in dhaxli karaan dhulka halkii waxa aan hadda joogta ah.
Ilaah u duceeyo & ur qoyska continously
ee ugu fiican
Waxaan ku faraxsanahay, waxaan helay this post ahay. Waxaan jeclaan lahaa dad ka badan xiriirka interracial muujiyay them9 sidan oo ay kasoo horjeeddo isagoo si hoos saaray kooxaha kale ee dadka. In daacadnimo oo dhan, Rabbiga ayaa ka shaqeeya on qalbigayga marka ay timaado mowduucan. Waxaan in aan daryeelo oo dhan ku saabsan cidda qof shukaansi / xaas loo isticmaalaa in hadalo cunsurinimo ah ku hadla. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah kulan negative la lamaane interracial iyo naag anti-madow dhaqdhaqaaqa hadda iga tagay jaded. Laakiin Ilaah baa mahad nimcadiisa, maxaa yeelay, wuxuu qalbigayga ku soo celinta iyo indhaha ii furan si ay u arkaan dadka iyo guurka sida saxda ah – xataa kuwa muujiyaan dabeecadaha xun dhinaca kooxda qowmiyadaha aan iska leh.
marvo jony • January 3, 2016 at 4:18 pm • Reply
raadinaya foward inaan arko qof dumar ah oo cad in jeclaan doonaa oo i guursado, waayo qofka aan ahay, waayo, si wanaagsan ama ugu daran waa riyadaydii
ama • January 25, 2016 at 1:44 pm • Reply
Waxa aan ku leeyahay waa mid aad u murugo leh .. Waxaan m ka qaybta bari ee dunida oo waan guursaday gabar caddaan.
ay adag farqiga u cultrual.. Waxaan helayso furiinka.
My ujeedii qoyska uu doonayo in uu ila kulmo oo aan marnaba la isu beddelo in qoyskeeda.
Waxay ahayd haweenka kaamil ah aan abid ku yeelan karaan, waxaan ka furtaan ay sabab u tahay arrimaha interracial..
waalidka waa ay xanuunsan yihiin oo ay doonayaan in ay US booqo oo ay naagtayda la noolaan iyocadhadii. Anigu waxaan ahay madaxa reerka sidaas darteed waxaan u leeyihiin in ay takecare qoyskeyga backhome.
im qaracan, halakeeyey hadda becuase ay hadda dhacaya aynu doonayno inaynu ilaa furiinka .
had iyo jeer waxaan iyada jeclaan doonaa
Wow. Taasi waa mid aad u awood badan, Ku dhiirigelinta iyo waxa ay indhahayaga furo si ay u arkaan ka baxsan indhahayaga jirka maxaa yeelay, laba qof oo Ilaah wuxuu iyaga ka dhig si aan Oofiya qasdigiisa.
Waa hagaag, waxaan ahay nin caddaan Good oo i weli ma buuxin karaa qof dumar ah oo wanaagsan in aan dago iyadoo tan iyo Haweenka maanta jira wax badan kala duwan ka badan la soo dhaafay.
Eric • Laga yaabaa 2, 2016 at 12:22 pm • Reply
run ahaantii aan daryeeli kari lahaa wax ka yar waxa qowmiyadda aad tahay haweeneydaydu, laakiin waa cajiib inay maqlaan adiga oo taas wax looga qabto (ama wax kasta oo) Arrinta si Khashuue ah iyo yididiilo sida. Waad ku mahadsan tahay marka hore Ilaah doonaya.
By dhammaan xisaabaadka waa erayadii uu noqon karaa run ma, qofka Muslinka ah ama ma. waa inaan xoogga saaraan aad isticmaasho xagga toos ah,” Weligay daryeelo, run ahaantii, waxa xaaskeyga Asalka ahaa si ay u noqdaan, sida aan dooqa koowaad iyada arki lahayd sida madow.” sida badan, Waxaan stuggled sida doonaya waajib in doonistiisa in aan Faith, laakiin waxaan rumeysanahay oo dhan waa ii, si uu ii soo diri doono waxay doonayaan, qalbigaygu ( ma ahan oo keliya doorashada shakhsi) maxaa yeelay, ii, Waxaan aaminsanahay in uu yahay halkaas oo gooni ah oo aan dulqaad iyo / ama Faith waxaa soo koraya. Sida aan ku raacsanayn AAD sheekada sida ay tahay marag AAD, Waxaan si siman qaban account inay sugayaan waxa ay u muuqataa wax aan macquul aheyn, sababtoo ah waxaa keeni by rabitaan ah, baahan yahay, ma ahan oo keliya u baahan a. Si aad si gaar ah: I jidh ahaan jeclaan lahaa in ay ku sugan shirkadda ee David Beckham, Chris Hemsworth, iyo Ben Affleck (marka hal), laakiin waxaan aad u jecel yihiin ma si ay u guursadaan; ma Markii qalbigaygu dooni quruxda, xoog, qof, iyo rag xoog badan oo ah ninka si yaab leh wax-abuuray madow! Haddaan ognahay hadhay dunida dembi laydinka xoreeyey, laga yaabaa in tani ma noqonayso walaac badan, laakiin dunida ahaayeen sida aadanaha si qurxan loo-dhigay ayaa Dullaysane, dulleeyay, edbin, ixtiraam la'aan, iwm…Waxaan saadaal wanaagsan uma baahna in aan la soo buuxi ambabbixisaan isaga la soo diray isaga by. Oo danbaynti, ii, siiyey maanta tusaalooyin disconcerning nin madow, Waxaan doonayaa iyo wiilkayga u baahan tahay in ay arkaan in waxa mar ahaa, (nin wanaagsan sida uu aabbahood way ka hor uu soo maray) weli oo mar kale noqon doonaa karaa…….
Waa farxad aad u weyn oo barako aan nolosha, i iyo ninkayga leeyihiin bilaabi sidii madhalays oo loogu talagalay 8years haatan sabab aan awood ii siin dhalashada iyo waxa uu ku go'aansado in dhibaatooyinka maalin walba in aan guriga,sidaas i soo booqday saaxiib dumarka ee Florida,oo iyana waxay la iman jireen fikrad ah carruurta la korsado oo i waligood ku hay,oo haatan i helay ma doorasho ka badan si aad u codsato ilmahaaga iyo in aan wax kadis ah wax kasta oo si fudud u tegey oo maanta i faraxsanahay wiil Hansom yar ahay(Wisdom)i xarunta ansaxinta ilmaha dalka Inter qaatay.
Mary • June 28, 2016 at 10:22 waxaan ahay • Reply
Taas ayaa ka dhigaysa ii relief.That aad ahayd go'aan wanaagsan in la sameeyo. ma garan kartid marka qofka xaq u yimaado around.No eegayn waxa tartanka aan ku eekaan doonaa in sida American.That Afrikaan ah waxaan had iyo jeer ma u leeyihiin in ay noqon in aan zone raaxada aan bixi karo sanduuqa. runtii waxaan mahad bayaankan idin siiyey . Ilaahay ha barakeeyo laga yaabaa in adiga iyo qoyskaaga la badan barakooyinka badan oo noloshaada.
Alle ayaan Andrew Samuel
Marcus • September 13, 2016 at 9:00 waxaan ahay • Reply
caruurta Great oo dhan oo idinka mid ah, kuwaasoo guursaday Ilaah. Waa in aan guursado dadka ku gartaan si loo nagu jecel iyo in nagu jecel DOONA! info waxaa loogu talagalay oo kaliya daters–ma is qaba; si, haddii aad guursatay, joogo guursaday, FADLAN! Haddii aad shukaansi, ka dibna Ilaah weydiiso si ay u muujiyaan kuwaas oo ay ahayd in aad is guursataan–maxaa yeelay, miyaanay waxba kula ahayn daacad ogaado! Dadka ka ciyaari kara wax fiican-fiican / cibaadalaawe iyo sidoo kale sababo kala duwan oo aad Doqon, dadka waxay noqon karaan dad wanaagsan(laakiin ma aha mid sax ah, waayo, jidka Ilaah ayaa kuu–MA ruuxa socon–xataa 2 carruurta Ilaah waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin 2 waddooyinka kala duwan oo aan saf ugu jira; xusuuso aayaadka bible meesha aan rumaysan xertii ayaa canaanatay nin Ilaah, waayo, isagu uma uu si toos ah u la xidhiidha iyaga la; Ciise’ Jawaabta waxay muujinaysaa in dadka yeelan karaan hawlgallada la aqbali karo in Ilaah, laakiin waxay noqon leheyn; ka dibna mar kale, Ilaah u sheegay in ay guursadaan Hosea dhillo–haddii xusuustaydu sax ah ii adeego). Sidaas, by dooranaya mid qaldan(mararka qaarkood, ilmo Ilaah wuxuu noqon karaa mid qalad ah kuu), aad ka maqnaan karaan on barakooyinka in laga yaabo in oo kaliya in la quful la mid sax ah. xataa Waxaad keensan kartaa inkaar in aad; kids aad waxaa laga yaabaa in Afguduud ama qaar ka mid ah aad ka hor inta dhiman karo; ma laga yaabaa inaad waalidka saxda ah ee aad ilmahaaga; waxaa laga yaabaa inaad dhalays ama dhalays muddo dheer; aad midkiinba midka kale jeclaado oo wax weli ma xaq u; laga yaabaa in aad hesho qof aad u siri(waxaa jira påskkäringar, iyo saaxiriinta,, labawejiilayaasha ahu,, xad rabshado, naggers ka leheyn, qishta, ascribers in la furo galmada ama LGBT nololeedka, dadka maskax ahaan aan daganayn, ascribers in bestiality–kuwaas oo kaliya isticmaalaan xayawaanka qoyska sida cover a, cawaan ama agnostics–kuwaas oo loo isticmaalo diinta in ka badan aad ku guulaysato, Beenaalayaal, ah islaweynida ama anaani, khamriga iyo drugheads, conpeople iyo helitaanka lacag sharci-darro ah, Gaalada / satanists, dadka caajis, caruureed ah–si xun u hadlaya, Dabcan, xad afka ah, malaaigta, dadka marnaba ka soo noqon doonaa, killers serial, deyayo / dadka incestuous, iwm. halkaas).
Waxaad weydiin Ilaah, maxaa yeelay, wuxuu leeyahay qorshe adiga iyo sababta oo ah(haddii aad ku furo sabab kasta oo) waxa aan aaminsan daacad ah in aadan u maleeyeen in mar kale guursaday ilaa xaaskaaga geeriyoodo(ama galmo mar kale kuwa khaa'inka). ma u maleeyeen Waxaad ka heli muddo furay(marka laga reebo xadgudubkii galmada), laakiin waa inaad iyada oo aan galmo ama guur haddii aad sabab kasta oo. aad si daacad ah u oran karaa in haddii aad(haddii aad naxdin ah xaaska iyo ma waxaad qaadan kartaa–waa in aysan dhicin xitaa ka dibna, laakiin waxa ugu sameyn) ama xaaskaaga waa sababta aad uga furay in aad tegi karto oo aan galmo guurka muddo laga yaabo in ay tagaan meel ka baxsan aad Ra'iisul galmada(muddo tani waxay noqon kartaa dhowr sano ee)?! Taasi waa sababta aad WEYDII WAA ahu WHO AAD GUURSADO WAA! Waxay iska ilaalisaa in dembiga ka dib(maxaa yeelay, waxaad laga yaabaa ama laga yaabaa in aanay ka heli nasiib, wuxuuna Eebe ogyahay) iyo safarka Christian yahay wakhtiba! Maxaa dhacaya haddii Ilaah uma uu jawaabin arrintan aad guurka(kids, aad) salaadda–kuu goosan wixii aad beeray dooranayso in ay guursadaan sababo shakhsi kaliya?!
Marcus • September 13, 2016 at 10:59 waxaan ahay • Reply
On arrin kale: waxaa jira qaar ka mid ah guurka(haddii aad ogtahay Ilaah ayaa saxiixay iyaga on–Weydiisato inuu iska hubi; ha u malayn) in la weydiinaya karo dhibaato: 1. guurka BMWF in America: waxaan ku nool nahay dunida cad horusocod, midab Ujeedada! cunsuriyiin White yihiin dagaal la kulmay midab takoor ka badan koox kasta oo aan abid arko! Markaasaa ninkii madow waa tirada cadowga 1! Waxay in aad cunto wax laga yaqyaqsado, madow iyo kids ay heli karaan hab ceebta / jeermiga-hal haysyo iyo Isgacan, kooxaha / inkaarahan oo la gelin karaa ninka ama kids uu, gaysteen muuqaal iyo ilaa hadda si saa'id ah ula dhaqma nin madow haddii guurka BMWF ah waa loo naadiyaa, sida aad u maleeyeen in, waxayna noqon kuwo diida qoyska, waxay “nepotize” xubno caddaan saafi ah qoyska(kids, aad) iyo takooro xubno isku qasan(kids) iyo ninka madow, gunuusaan ka dhanka ah ay “cadaawayaashiinna”, ay weeraraan iyo / ama u dilo ragga madow, xiriirka walaalkiis / walaashiis qaarkood waxay noqon doontaa murugsan ama inimical iyo ku dhowaad dhammaan walaalkiis cad / walaashaa-in-sharciga kuma lahaan doono ama xiriir inimical ay dhigiisa madow, macalimiinta xeelad villify, iwm. Ma qiyaasi kartaa suurto gal kids aad lahayn / xidhiidhka raqiis ah oo ay qoyska hooyada? Ugu Christmas: kids cad u hesho a $150 hadiyad ka xubin this, laakiin kids aad u hesho $25 hadiyad ama waxba. Ma qiyaasi kartaa haddii ay jiraan wax ku dhacay qofka aad jeceshahay(ninkaaga ama ilmaha) oo waxay la yaabeen in qoyskaaga lahaa wax in la sameeyo waxa la oo aan si ay u xaqiijin karin? Qaar badan oo waxyaalahaas laga fili karo; laakiin sidoo kale, Labada qof waxay leeyihiin in ay wax ka qaban in guurka kale leeyihiin in la qaban, aad! biilasha, guriga daryeelka qoyska / hantida, kharashyada qoyska(mararka qaar lama filaan ah), kids dood(GAAR iyo waxay u baahan tahay waqti badan yihiin kuwa kale–xataa dhiiri ilmahaaga in ay ogaadaan in qaybta cad cunsurinimo iyaga ka aragtid sida madow iyo dayactirka dheelitirka ah in isagu / iyadu u jecel yahay labada waalid iyo dadkii oo dhammu isku mid ah ay u kala horreeyaan), shaqooyinka, waqti la saaxiibadaa si ay u sii saaxiibadaa, iwm. Waxaa uu aad u badan socday ka dhigaya guurka ku faraxsaneyn, haddii Ilaah ma siin!
2. Guurka halkaas oo ay jiraan farqi weyn ee falsafada diinta ama meesha qodobada muhiimka ah ee waxbarista diinta waa ka soo horjeeda ama aan socon. Boqor Sulaymaan Just weydii. Christian iyo muslim. Christian iyo Buddhist. Christian iyo Hinduuga. Christian iyo mulxidnimo. Christian iyo satanism(illuminati, freemasonry, iyo Kooxo kulamo kale oo ay). U hubso in Ilaah waxaa aad doonayo hor galaya, maxaa yeelay, Ilaah waxaad isticmaali kartaa si loogu badalo qofka ama qof kale oo guura oo waxaad ku dhagaysan doonaa!
BRIAN • December 28, 2016 at 6:25 waxaan ahay • Reply
article Good, waxa uu reverently hadlay naftayda.
Ilaah adiga iyo qoyskaaga barakeeyo weligiis iyo nolosha weligeed ah.
Tani waa sidaas Awesome. Waan jeclahay. Ilaah ha idiin barakeeyo.
raseysan Joel • January 2, 2017 at 4:04 pm • Reply
Tani waa sidaas Awesome. Waan jeclahay. Ilaah
ha idiin barakeeyo.
run ahaantii aan jeclaa aad drive, go'aan, diyaarinta, & iimaanka. Xaqiiqada ah in cudurka tan aad leedahay ayaa aad u dhibayay & runtii sameeyey nolosha adag idiin gabi ahaanba waa waalan! Si kastaba ha ahaatee, aad perserve & dagaalamaan iyada oo loo marayo oo dhan ka mid ah in & sii wadaan in ay buuxiso waxyaalaha Ilaah idinka warsan. Markii aan maqlay in Unashamed Tour ee 2012 waxay ahayd koox ee ugu danbeysay ee aad safar, maankayga bilaabay inuu la yaabi sida in sababta aad u soo laalaadeen ilaa. Marka aan ogaaday in aad jirradaada daal & in aad indho taag internship a-dhaqatada, Waxaan bilaabay in la fahmo in Ilaah Ujeedada kale kuu. Marka Kac la sii daayay, Waxaan ahaa SOOOO faraxsan! Man, Waxaan ahaa Crore soooooo! Si aad runta aan idiin sheego, Life Good waxa uu ahaa Christian album 1aad Hip-hop-waan dhegaysanayay & iibsaday. Ever tan iyo markaas, Waxaan la khali gal music hip in ammaanay Ciise. Your music ayaa si saameynta badan ee noloshayda. Waxaan kuugu duceeyaa inaad sii wadaan si ay ula dagaalamaan iyada oo loo marayo halganka aad iyo saamayn boqortooyada! #116
Blossom • March 8, 2017 at 3:10 pm • Reply
sheeko cajiib ah. Waan ku faraxsanahay ama aad. Waxaan ahay inaan qowmiyad gaar ah laakiin in aan i badbaadiyo nolosha ugu gataan, waxaan ku noolahay. Waxaan kaliya dhawray wixii la ii guurka si ay u ilaaliyaan aan kids mustaqbalka iyo Ilaah neceb furiinka. Waxaan ku nool cadaabta ah ayaa rajeynaya inay gabaad tagaan.
achi • Laga yaabaa 7, 2017 at 5:57 pm • Reply
Jacaylku waa wax walba…midabka waa waxba…
LaKiKI • Laga yaabaa 11, 2017 at 9:57 pm • Reply
Yaad la isku dayayo inuu ka dhaadhiciyo aad doorato? Waxaad, na ama? Haddii aad si dhab ah gaaray naagtaada, maxaa yeelay Eebe article tani ma jiraan lahaa. Uma baahnid ogolaanshaha. Haa, Anigu waxaan hubaa in ay jiraan kuwo badan oo dumarka Black sida Ilaah doonayo in ay ahaayeen oo kaliya sidii la yaab leh sida naag aad dooratay. Laakiin uma rabto in aad, ama aan xiiso. Oo waxay doonistaadu ahayd naagtaada. Tani waa wanaagsan. Just joojiyaan isku dayaya in ay qiil, sida ay tahay doqonimo iyo saxsanaanta.
WAAN AHAY murmin xaalkooda kaliya comments in cosign xaaladdaada is posted, laakiin mar dambe ayaan isku dayi doonaa. arrimaha hadalka Free!
WOW HORTA. Waxaad u baahan tahay si ay u tagaan si ay Ilaah iyo hesho in erayga. Ma kula tahay in aad ogaato waxa aad ka hadleynaa sababta si cad aad seegtay barta of this. Im fekerayo siinin inaad ku gaadhaan danihiina ujeedada isaga sameynayo waa in la caawiyo iyo dhiirigelin karo kuwa kale la isku xaalad. Sida aad yimid off u muuqataa sidii ay cadho ama Jaahil ah ama waxaa laga yaabaa xitaa laftiisa prejudence sababtoo ah waxaad u malaynaysaa inuu isku dayayo inuu tuuro in dadyowga ka fool ayuu la jiraa qof dumar ah oo cad oo kiiska ma hooba. Waxay arrintu u muuqataa in aad sida uu waalan leh muddo gabar caddaan.
Tiffany • June 27, 2017 at 5:55 waxaan ahay • Reply
Waa maxay kor Trip. Tani waa Tee. Xaqiiqdii waan ku riyaaqay qodobkan. Inkasta oo aan ahay sano ka dambeeya. lol. Laakiin daacad ah ay jirto sabab aan u arkay oo kaliya. Ninkeyga waa cad yahay oo aan aad u soo koray aniga qudhaydu curiyo nin madow. Laakiin Ilaah baa i abuuray in ay kala duwan. Xitaa korayaan waxaan ahaa kid ah qabow on block ah, loo yaqaan mid ka mid ah fellas ah. Markaas kulliyadda isbedel horyaalka fellas marka waxay u maleeyeen waxaan ahaa cute. Laakiin maxaa yeelay, waxaan ahay sarkaal in ay ahayd in ay ku adag tahay nin madow inuu i on taageero. Sidaas helay mahad at 30. 3 sano xoog leh gabar qurux yar. Kaliya waxaan ku baryayaaye dunida wada iman karo iyo ogaataan jacaylka uu leeyahay midab lahayn. Ilaah ammaan
P.S. Xaaskeyga walaalkiis Lil waa Asian, guursaday 9 sano. Hooyaday na ugu baaqaysaa in iyada dheri barafku jacaylka.
CAPTJIMJIMANAMBO • July 16, 2017 at 7:59 waxaan ahay • Reply
Ilaah ha idiin barakeeyo!
AAD ii barakeeyey.
Millz • August 5, 2017 at 10:35 waxaan ahay • Reply
aniga iyo xaaskeyga waan Labada mahad wadahadal sida aynu dareeno noocaan ah iyo Xaddithyada, sida “fogaynayso” sida ay la baahan karaa in wax laga qabto ee bulshada iyo ka sii muhiimsan sida Masiixiyiintu. Anigu waxaan ahay nin dhallinyar oo madow qudhaydu, xaaskeyga, waa kan cad, Waa toddoba sano ka yar tahay waxaan. labada Waxaan jeclahay Masiix si qoto dheer. Sida aan si dhab ah u rumaysan in baryadiinna Masiix wuxuu inaga kasta oo kale oo siiyey. Hadda waxaan waalidiinta afar caruur ah oo qurux badan in qoys aayo. ururka Tani Ilaah wuxuu abuuray noo waayo, hubaal ma ay iman iyadoo caqabado ay asxaabta iyo qoyska aan laga badiyay jidka ah in aan weli u duceeyaan. Runta waxa ay tahay qorshaha Ilaah ee inoo marna waa waxa aan loogu tala galay. Iyo Kitaabka Quduuska ah waa chock-full of xaaladood in hadlaan on our qorshaha Ilaah iyo si kaamil ah rabbaani ah. (Hosea / Gomer waa tusaale kaamil)
Waxaan qabaa aragtida dunida ka mid ah ururada interracial ayaa hareeyay durraaxado ee nacayb, necbahay, waxyaalo badan oo kan sharka leh iyo xune in belaayo ku fikirrada binu-aadmiga oo tan iyo markii la aasaasay our. Waa sababta Kitaabka Quduuska ah oo waa sheekada ugu weyn jacayl dhammaantood weli macno xitaa millennias oo dhan ka dib markii.
Aniga iyo xaaskayga waxaan soo maray nacayb this gacan koowaad ka labada dhaqan iyo xitaa dadka kale ma noo gaar ah. Waa xataa u xiiso badan marka ay tahay qof oo sheegtay in Christian ama kuwa aan baaraandegi ay Jaahil ah u gaar ah. Markii waxyaalahan dhici noo aannu u aragno sida duco, maxaa yeelay waxaan ognahay sida dhow oo kaliya, innagu waxaynu nahay codkii Ilaah maqalka iyo ma u gaar ah. Waxa uu (Masiix) at kuwa daqiiqado aad na ku dhufan la Galatiya 2:20, Haddaba waxaan ognahay dagaalka waxaa laga yaabaa in aan dooneyno in aan ma annagaa leh si ay ula dagaalamaan. Ma ay u fududaato si aad u maqasho in? Ma aha at dhan, kaliya waxay Muujin su'aalo dheeraad ah: “Waayahay, Innaba dib ugama aan u dagaalami karin, laakiin waxa ku saabsan carruurta aan? Sidee ayaan ka nacaybka ay arkaan iyaga loo ilaaliyo?
Taasi waa marka aad ay ogaadaan in guurkaaga uu ahaa oo keliya ma aha shakhsi ah, safarka jirka, laakiin mid ka mid ruuxi ah.
Aniga iyo xaaskayga waxaan jira in our sannaddiisii ​​sagaal on guurka (geliso sacab) oo ma aannu ka sii adag oo ka midaysan, maxaa yeelay, aan hadda ku aragno our mission, ma waxay noqon kartaa si ka badan cad. Marka Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay aan tihiin iftiinkii dunida, aanu run ahaantii nahay! Iyo qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in aan fahmi in, laakiin markaas waxaad ka heli dhowr ah kuwaas oo isku yidhaahdaan: “Haa! Waxa aad laba leeyihiin waxaan doonayaa in!”
Si aan Trip walaalkiis iyo qoyskiisa cajiib ah oo qoyska kordhin waxaan ku odhan,
Your safarka ayaa hada dhow bilowday kaasaa walaalkay iyo walaashay . Ku xoogaysta Rabbiga iyo xoogga itaalkiisa. Wuxuu idinku wadi doonaa ilaa iyo inta aad marna joojin socda isaga si.
Waxaa jiri doona caqabado badan, waan hubaa in aad u badan tahay ayaa hore u soo maray iyaga oo ku nool Koonfurta. Laakiinse idinku waxaad tihiin tusaale ka mid ah quruxda dhabta ah ee Ilaaheenna, iyo Rabbi Ciise Masiix. In jacaylka iyo guurka tani waxa ay muujinaysaa ugu fiican, waayo, Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in marar badan in “Waayo, waxaa jira ma eego qofka la Ilaah” – Romans 2:11
Ilaahay ha idin barakeeyo oo dhan kuwa kale on this post magacaabi magaca Ciise Masiix
achi • September 22, 2017 at 11:55 waxaan ahay • Reply
Inaan sameeyo isku Godwilling
Bro, Waxaan si furfurnaan iyo inaad ixtiraamtaa on this post. Waxaan maqlay share cadaalad ah sababaha ragga madow guursataan Haween ah oo ka duwan jinsiyadda / qowmiyadda. Tani waa mid ka mid ah dhawr jeer waxaan maqlay brotha a’ muujiyaan muhiimadda ay leedahay in sida Ilaah doonayo sifooyinkii badan lala barbardhigo sababta haweenka ka mid ah qowmiyadda ka khayr badan haweenka qowmiyadda kale. Oo daacad ah waxa ay ku saabsan boqortooyada ujeedada ka badan doorashada. Ilaaheenna sii wadi laga yaabaa inuu idin barakeeyo, naagtaada iyo qoyska!
Trinitee Hudson • October 20, 2017 at 12:29 waxaan ahay • Reply
Walaalkay in Masiix. Aad baan u barakaysan by this article. Waad ku mahadsan tahay jidaynayey erayga inay dadka baraan oo xallin lahaa arrimaha dadka aadan fahmin.
Waxaa i dhiirri-aad mowqifka in aad guur laakiin runta aad adeegi sidoo kale. Ilaah adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo.
Ma dareemayo inaan in loo baahan yahay qodobkan. Weligay ma arkin koox dad ah oo dareensan baahida loo qabo in qiil u doonaya in ay guursadaan cad sida aan soo aragnay in dadka madow si gaar ah dadka madow. Waxaan ogaaday in dadka madow, kuwaas oo taariikhda iyo guursadaan kooxaha cad aan ma qiil sababta ay u guursaday in qof caddaan non. Haddii ay sameeyaan, ma aha in heerka in dadka madowga ah kuwaas oo guursaday cad.
Waxaan kaliya ay ku adag tahay inay rumeeyaan in dhammaan kuwa jinsiyadaha haweenka dugsiga in Ilaah u adeega iyo isaga oo jecel yihiin inay si buuxda ma ishaada qabsado laakiin gabadha cad, naagtii ayaa sheegay in ninka madow ee kryptonite, qabtay ishaada guur. kaliya aad u doonayay in ay guursadaan cad oo isku dayaya in ay Ilaah keeno in iyada oo loo adeegsanayo si aan u muuqdaan sida walba si Ilaah amreen marka dhaqanka this ka horeeyey addoonsiga.
Haddii aad rabto in aad taariikhda ku cad okay laakiin inuu qoro maqaal ka dhigan tahay waxaa jira wax aan gelida ruuxiinna in.
Aamiin • January 10, 2018 at 1:04 pm • Reply
La yaab ma laha sababta haween badan oo madow yihiin careysanahay maalmahan.
Joshua Storm • February 3, 2018 at 1:50 waxaan ahay • Reply
waan kuugu raacsanahay, Trip Lee. Waxaan u imid in la ogaado in qofka oo dhan ka kooban yahay ruux, naf, iyo jirka. Sidaas awgeed, waxaan tihidiin ruuxa, naftooda, oo waxaan ku nool nahay jidh. Waa arrin aad u nasiib-darro ah in dadka intooda badan eegno “guri” weli waxa muhiimka waa ruux / qalbiga qofka. Waxaan jeclaan lahaa inaan dib-u-xoogga saaraan this qof halkaas reading aan comment halkan. Nin waa jinni-qabka. Waxa uu leeyahay naf (dareenka iyo fikradaha) oo wuxuu ku nool yahay jidhka ah.
maqaarka in caddaan ama madow in inta badan dadka mar walba waa deg deg ah in la ogaado waa uun guri aan ku noolahay. Mine waa madow, laga yaabee idinkaa leh madow. Si ay u qeexaan dadka midabka ah ee ay “guri” waa sida wax u xukumaya ka kooban warqad ka timid muuqaal u eg ka baqshadda. Sababta sababta ay yidhaahdaan “meydkiisii ​​loo dhigay intiisa kale” waa in aad, sababtoo ah ma aha jirkaaga, laakiin halkii aad ku nooshahay waxa ku jira. Haddii aan oo dhan mahad runta kuwan, ma jiri doono wax kasta oo arrimaha jinsiga ama midabka. Ilaah waa hal abuur leh, wuxuu ogaa inay dhulka this ahaa shiraac, iyo weligiisna rinjiga lahaa dhammaan cad, ama dhammaan madow. Beauty of tahay waa in boorish ah oo midabo, ma mid keliya. Taasi waa si hufan sababta aan waajibka ku ah inay u dabaal hal jinsiyad kale halkii dubbeyn ku saabsan kala duwanaanshaha our. cake A ku jira xaddi wanaagsan oo dhowr ah maaddooyinka ay ka mid yihiin ukunta, cusbo, sonkorta, iwm. Marka Gaalada lagu wada milmay oo waxay ka dubtay, waxaan ka heli cake wanaagsan ee in. Isku day inaad cusbo ku soo shuba, sonkorta, saliidda, iyo ukunta afkaaga ka hor la dubayo iyo aad u badan tahay baxay puke doonaa brojektikani aad!
Sidaas daraaddeed haddii xaaskiisa / ninkeeda waa huruud, white, cagaaran ama wax kasta oo aan waxba ka qiimo dood. Ujeedadu waxay tahay in y'all heli xiriir in y'all qabaa waxaa haboon hayo naftiinna oo dhan. Period. Waxaan si daacad ah u maleynayaa in dadka kala soocid ku salaysan jinsi yar yar yihiin maskax, oo ma ay arki karaan qofka oo dhan (ruux, nafta iyo jidhkaba).
Biota Macdonald • Laga yaabaa 14, 2018 at 10:34 pm • Reply
Jacaylka in aad ku qoray oo arrintan ku saabsan! Waxaan ahay in guurka ah interracial qudhaydu, iyo in siyaabo badan oo aan ahaa awoodaan in ay la xidhiidhaan badan waxa aad la wadaago.
Triola Dulaney-Ndiaye • August 20, 2018 at 12:54 waxaan ahay • Reply
Dadka iyo fikradahooda! Waxaad guys sii nool, waayo, Ilaah! Waxaad leedahay qoys ah oo qurux badan!
RealityCheck • September 8, 2018 at 7:41 waxaan ahay • Reply
Wow, waxaan ahay cad oo i xitaa ma kula kulmi kartaa qof dumar ah oo hufan caadi cad maanta.
Beluga • September 9, 2018 at 7:00 waxaan ahay • Reply
First oof Ι oo dhan doonayaan in ay sayy blog weyn! iyo
lahaa su'aal quicқ oo waxaan jeclaan lahaa inaan si aad u weydiiso haddii үou
wax kama qaba. Waxaan ahaa Armaajada ᥙ ѕ si aad u ogaato hоw aad yourѕelf xarunta iyo nadiifiso maskaxdaada pгior qorniinkii.
Waxaan һave waqti adag nadiifinta thoughfs aan fikirradayda baxay helitaanka.
Waxaan si dhab ah ha ku raaxaysan writіng si kastaba ha ahaatee waxa ay u muuqataa sida firet tһe 10 aad 15 daqiiqo nala ᥙ juist bahaysi badiyay isku dayaya in ay fi ց urfe outt sida si ay u bilaabaan. fikradaha kasta ama tilmaamo?
Xusuuso: Haweenka Waayo Trump Oo Ragga Black The jecel iyaga – Guurka Interracial
Jill • February 10, 2019 at 7:36 waxaan ahay • Reply
Had iyo jeer isticmaal sabab ah in la sababeeyo waxa aad samayn.
Erma • Laga yaabaa 2, 2019 at 12:48 pm • Reply
Dad badan ayaa u baahan hal kaas oo ay iyaga gaar u ah, ama kaliya
wax caadi ahayn ama gaar ah.
qareen furiinka • June 19, 2019 at 1:59 waxaan ahay • Reply
Ma waxaad u xusuusan haddii aan wax yar oo ka mid ah posts aad qaadan ilaa iyo inta
Waxaan ku siin credit iyo ilaha back to your site?
My blog waa sida adiga iyo martida aan goobta saxda ah isku dan
run ahaantii ka faa'iidi doonto macluumaad badan oo aad halkan ku soo bandhigaynaa.
Fadlan ii soo sheeg haddii ay tani okay aad la. Thanks!
haweenka • August 2, 2019 at 3:14 pm • Reply
Ꮃ ow, аrticle tani waa nice, walaashay waxaa la falanqeeyo sida
wax, Sidaasaan goіng inaan wargeliyaan һer.